အကြံပြုချက် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > FAQ & Request Zone > အကြံပေးရန် > အကြံပြုချက်
View Full Version : အကြံပြုချက်
ကျွန်တော်နည်းနည်းအကြံပြုချင်လို့ ပါခင်ဗျာ။Forum မှာ ခေါင်းစဉ်ထပ်နေတဲ့ ကိစ္စလေးပါ။example ........operation system အောက်မှာ windows and non-windows ရှိတာတို့ နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာဆွေးနွေးချက်နေရာမှာ အဲဒီခေါင်းစဉ်ပဲထပ်နေတာတို့ ပါ။ခေါင်းစဉ်ကိုစုထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ရေးချင်တဲ့သူကလည်းတစ်နေရာတည်းမှာရေးပြီးသိချင်တဲ့သူတွေကလည်းတစ်နေရာထဲမှာ အလွယ်တကူရှာဖွေဖတ်လို့ ရမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့ဒါလေးပါဘဲခင်ဗျာ..........
ညီလေး ကရင်လေး ..အကြံပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
နောက်လဲ လိုတာလေးတွေရှိရင် အကြံပေးပါဦး ...
operation system မှာ non window windows ရယ်...ကျန်တဲ့နေရာက non windows ,,windows တွေ ထပ်နေပေမယ့် မတူဘူး...
တခုက os link တွေ ပေးလို့ရအောင် တခုက အဲဒီ os နဲ့ ပတ်သက်ပြိး ဆွေးနွေးမယ့် နေရာ..တခုက application တွေ တင်ပေးကြမယ့်နေရာပါ.. category အလိုက်ခွဲထားတာပါ..မရှုပ်အောင်လို့ပါ..လိုတဲ့လူက လိုတဲ့နေရာမှာ ၀င်ရှာလို့ရအောင် လုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ အကို ကျွန်တော်အခု မှရှင်းသွားတော့တယ်။ကျေးဇူးပဲနော်အကို ရေခါး။
အကြံပြုချက် လို့ခေါင်းစဉ်တင်ထားလို့ ဒီမှာပဲဝင်ေ၇းလိုက်တာပါ.. အပေါ်ကအကြံနဲ့တော့မတူဘူး ဒါက အကြံသစ် စောစောကမှကြံတာ :P ဟဲဟဲ အလကားစတာပါ .. အခု ဖိုရမ်မှာ ခေါင်းစဉ်တွေများများလာတယ်ဗျာ.. ကျန်တာကိုတော့ သေချာမသိသေးဘူး တစ်ခုက ကိုယ်ပဲအကြည့်မှားသလားတော့ မပြောတတ်ဘူး ကိုယ်ပိုင်စာစုများ မှာ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ကဗျာတွေကိုတွေ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ကတင်ရင် topic တစ်ခုဖွင့်တော့ ခေါင်းစဉ်တွေများမနေဘူးလား ကဗျာများ ဆိုပြီးတင်လိုက်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား အခုက တခါတလေ တစ်ပုဒ်နဲ့ topic တစ်ခုဖြစ်နေသလားလို့ပါ အခုဆိုရင် တစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာ တခြားသူက သူ့ကဗျာကိုဘယ်တင်ချင်မလဲ ဒါမှမဟုတ်ရင် topic ရှင်ကမကြိုက်ရင်ဆိုတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လေ ကိုယ်တွေးမိတာလေးတစ်ခုပါ.. ဘာရယ်ညာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး. ကိုယ်ကကဗျာပဲဖတ်မိလို့ ကဗျာကိုပဲပြောတာနော် .. anyway thz.. .
ဟုတ်ကဲ့ ..အခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ .....
ရေးသားသူ တစ်ဦးတည်း ကဗျာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကျွန်တော် စုစည်းထားပါပြီ ..
၁ ပုဒ် ၂ ပုဒ်လောက်တော့ ထားလိုက်ပါတယ် ..များလာရင်တော့ ကျွန်တော် စုစည်းထားလိုက်ပါတယ် ..
နောက်ရေးသားမည့် သူများကိုလဲ nway_oo ပြောသလို လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ..
စောစောက application ကိုဝင်လိုက်တောာ့ antivirus ဆိုပြီးစုစည်းထားတာတွေ့ရတယ်
တော်တော်ကောင်းပါတယ် အဲလိုပဲ virus ဖြေရှင်းနည်းတွေကလဲ ဟိုတစ်နေရာ ဒီတစ်နေရာဆိုသလို
ပွနေပါတယ် တစ်ခြားသူတော့ မသိဘူး မိုးပြေးလေးတောင် ပြန်ရှာရင်မူးနေအောင်ရှာရပါတယ်
virus ဆိုတာကလဲ ဒီမှာက တစ်ယောက်ဖြစ်ရင် အကုန်လိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ အားလုံး
စုစည်းထားရင်တော့ ကောင်းမှာပါ မိုးပြေးလေးထင်တာလေးပြောကြည့်တာပါ
ကျေးဇူးပဲ အစ်မရေ အစ်မပြောသလိုပဲ ဖိုရမ်မှာ တူနေတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကို
ကျနော်တို့ ဖြေးဖြေးချင်း ရွေှ့သွားပါမယ်..တစ်ခုခုရှာရင် ခေါင်းမူးတာတော့ အမှန်ပဲ..... ;D
အဲဒီ အကြံဥာဏ်လေး တန်ဖိုးရှိပါတယ် ...။ ပြန်စုစည်းထားတော့ အလွယ်ရှာနိုင်တာပေါ့
လောလောဆယ် ရှာရခက်နေတာလေးတွေတော့ (ရှာဖွေရန်) ကိုသုံးပြီးရှာကြည့်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...။
ဒီလိုပါ...ဒီနေ့ ကျွန်တော်စာအုပ်တချို့လိုချင်လိုရှာပါတယ်...တွေ့ပါတယ်....ဒါပေမဲ့ link တွေက မရတော့ပါဘူး..
ကျွန်တော်က forum တွေ၊ web တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ်မသိတော့ မှားနေရင်လဲ ခွင့်လွတ်ပါ...
တင်ပေးတဲ့တစ်ယောက်က အခု online မသုံးဖြစ်တဲ့အခါ သူ့ဆီက မရတော့ဘူးပေါ့...
သူ့ link တွေကလဲအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလေ....ဒီလိုဆို သူ့ဆွေနွေးချက်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်မှာလား...
ကျွန်တော်က ပိုကောင်းမလားလို့ အကြံပေးတာပါ....
ညီလေးပြောသလို လင့်တွေကမရတာလဲဖြစ်တတ်ပါတယ် တင်တဲ့လင့်တွေရဲ့သဘောကိုက အဲလိုလေ သက်တမ်းရှိတဲ့ဟာတွေရှိသလို account လုပ်
ထားမှ၇တာမျိုးလေ အားလုံးကလင့်တင်ရင် မြန်မာပြည်ကလဲအဆင်ပြေအောင် တင်ပေးကြတော့ မရရင် လိုချင်တာကို တောင်းလိုက်ထပ်တင်ပေးကြပါလိမ့်
မယ်အားလုံးက လေ ကူညီကြမှာပါကွ စိတ်သိပ်မပူပါနဲ့
ကိုLittle3278 အခုလို အကြံပေးလို့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ...ကိုLittle ပြောသလိုပဲ Uploadဆိုဒ်တော်တော်များများကသူ့သတ်မှတ်ထားသလောက်ပဲရပါတယ်..ကြာရင်ပျက်သွားပါတယ်..
အဲဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ဖိုရမ်မှာ ဒေါင်းလုပ်စင်တာဖွင့်ထားပါတယ် ..ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,421.0.html) ကိုတာယာက ဒေါင်းလုပ်စင်တာနဲ့
ပတ်သက်ပြိး အပ်လုဒ် နှင့် ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နည်းတွေကို အသေးစိတ်ရေးသားထားပါတယ်...
ဒေါင်းလုပ်စင်တာမှာတင်ထားတာတွေကတော့ ကျနော်တို့ဖိုရမ်ကြီးတည်ရှိနေသ၍ ဒေါင်းလို့ရနေမှာပါ...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးအကြောင့် ဒေါင်းလုပ်ကဏ္ဍမှာ နည်းနေတာတော့ သီးခံပေးပါခင်ဗျာ ကျနော်တို့ဖြေးဖြေးချင်း
ပြန်ဖြည့်တင်ပေးပါ့မယ်...နောက်တစ်ခုက အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ လင့်တွေကိုဖျက်ဖို့ကိစ္စပါ..
ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ မဖျက်ချင်ဘူး..ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တင်ထားပေးတဲ့သူတွေကလည်း စေတနာနဲ့တင်ပေးထားတာပါ.
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သာ လင့်တွေ အလုပ်မလုပ်တော့တာပါ..မဖျက်တော့ပေမယ့်ကျနော်တို့ ဒီတိုင်းပစ်မထားပါဘူး.
အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ လင့်တွေကို အတက်နိူင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစစ်ပြီးပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ..
ဒီကြားထဲ ဒေါင်းလုပ်အဆင်မပြေတာတွေ ရှိရင်လည်း ဒေါင်းလို့မရရင် မရတဲ့နေရာမှာ တောင်းခဲ့လိုက်ပါ..
အသင်းဝင်တွေထဲမှာ ရှိတဲ့သူများက ပြန်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်..နောက်ဆုံးမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ရှာပြိး ပြန်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ...
ဖိုရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို အကြံပေးတာကိုကျေးဇူးပါ နောက်များလည်း ဖိုရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး အကြံပြုပေးပါဥိး...
chat room မှာ ဘယ်သူတွေ ရှိနေကြတယ် ဆိုတာ chat room ထဲ မ၀င်ပဲ home page မှာ ကြည့်လို့ရရင်ကောင်းမယ်နော်။ (ခုတော့ chat room ထဲဝင်လိုက်၊ သရဲခြောက်မှာ စိုးလို့ ထွက်ပြေးလိုက်နဲ့ ;D ;D)
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ် ခင်ဗျာ ... အကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
M&amp;E နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တခုက Electrical အောက်မှာရောက်နေပါတယ် ... အောက်ကလင့်ခ်မှာပါ
အဲဒါ Civil အောက်မှာ ကျနော်ရေးထားတဲ့ M&amp;E Building Services ဆိုတဲ့ thread ကို ရွှေ့ရင်ကောင်းမလားလို့ ... တစုတစည်းထဲဖြစ်သွားအောင်ပါ။
သူကဘာမှလည်းဆက်မရေးဘူးနော် ... ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီးသလောက်တော့ EP မှာထားထား၊ Mech; မှာထားထား အကျုံးဝင်နေတယ်ထင်တာပဲ အကိုရေ ...။ :) :)
တကယ်လို့ ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ အကို့ပို့စ်တွေကနောက်ရောက်သွားမယ်အကို၊ သူရေးထားတာက June 23 နောက်ဆုံးဆိုတော့ ...
မေးရအောင် ကိုmks က active လည်းမဖြစ်တော့ဘူး၊
http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,634.0.html မှာရွှေ့ထားလိုက်ပါပြီ ...
post ဘေးမှာ နံပါတ်လေးတွေပါရင်ကောင်းမယ်နော်
ထင်တာလေးပြောကြည့်တာပါ ဘယ်Post နံပါတ် ဘယ်လောက်ပါဆိုပြီး
topic တွေကတော့ သူ့နာမည်နဲ့သူဆိုတော့ တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရပါတယ် ... :)
အဲလိုလား မတွေ့လို့ပါ ကျေးဇူးပါကိုနေ
mechatronics engineering ဘာသာရပ်ကို (mechanical ) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအောက်ကနေ forum ပေါတင်ပေးပါလားဗျာ
နောက်ပြီး မြန်မာလို စက်မှုအီလက်ထရောနစ်လို့ပဲ ဘာသာပြန်စေချင်ပါတယ်
အကြံပြုချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုစကီ။
ကျောင်းတွေမှာ သုံးတဲ့နာမည်အတိုင်း ပြင်ထားလိုက်ပါပြီ။
သူ့ကို Board သက်သက်မခွဲနေတော့ပါဘူး။စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ ဆိုတဲ့အောက်မှာပဲ Branch တစ်ခုအနေနဲ့ထားတာပဲ အဆင်ပြေလို့ပါ။
အခြား Major တွေမှာ နာမည်ပေးတာမှားတာလေးတွေ ရှိခဲ့ရင် အကြံပြုပေးကြပါဦး။
ဖိုရမ်ပုံစံ ပြောင်းသွားတယ် နော် ကောင်းပါတယ်
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြောဦးမယ်နော်
နောက်ဆုံး post များကို မြင်သာအောင်ထားပေးလို့ရလား ခုက ကြည့်လိုက်ရင်
ဘယ်သူရေးလို့ရေးမှန်းမသိ ဘာ မှန်းမသိဆိုတော့ လေ မျက်စိကန်းနေသလိုလို
ပို့စ်တွေ ပေးမြင်ထားတဲ့အခါ ပုံတွေများတဲ့ ပို့တွေပါတဲ့အခါ တက်တာကြာနေတာရယ်၊်၊copy right ငြိနိုင်တဲ့ စာအုပ် software များတင်ထားတဲ့အခါ အလွယ်တကူတွေ့သွားနိုင်တာရယ်၊Guest တွေအနေနဲ့ Home page က ဟာလေးကိုပဲ ဖတ်ပြီး ဖိုရမ်ထဲ မ၀င်ဖြစ်တော့တာရယ်တွေကြောင့် ဖြုတ်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကြေငြာချက်တွေကို မန်ဘာတိုင်း သိစေချင်စေတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဖြုတ်ထားတာပါ။
ရေဒီယိုဖြုတ်ထားတာလည်း မြန်မာက မန်ဘာတွေ ဖိုရမ်ဝင်တဲ့အခါ ကြန့်ကြာနေမလားဆိုပြီး ဖြုတ်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လျှောက်လုပ်ထားတာ တစ်ခုမှ မရှိပါ။ :)
မန်ဘာများမှ ရေဒီယိုပြန်လည်ထည့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုမှုများရှိလာခဲ့လျှင် ရေဒီယိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးပါ့မယ်။
ယခုလို ဖိုရမ် မူလ စာမျက်နှာ ပြောင်းသွားတဲ့အပေါ် မန်ဘာများအမြင်၊အကြံပြုချက်များ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးရေးသားနိုင်ပါတယ်ဗျာ.. :)
ရေဒီယိုလေးပြန်ထည့်ပေးပါလို့ ဟိန်းလေးတောင်းဆိုပါတယ်ရှင် ::)
chat room ထဲဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတာလေးလည်းထည့် ပေးစေချင်ပါတယ်
myanmar engineer forum ခိုင်မြဲပါစေ
ဟုတ်ကဲ့..မြန်မာက လိုင်းနှေးနေမလားလို့..ခဏ ဖြုတ်ထားကြည့်တာပါ..MEF ကို ၀င်တာကြန့်ကြာနေမလားလို့ ခဏဖြုတ်ကြည့်လိုက်တာပါ။
အားလုံး အဆင်ပြေပြေ နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ.....
ကိုယ်ပိုင် ရေဒီယိုလွှင့်ချင်ပေမယ့်လည်း ကြေငြာသူ အသံလှလှနဲ့ မိန်းခလေးများလိုအပ်နေမှုကြောင့် အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယိုကိုပဲ ဆက်လက်သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Chat Room ကို အသစ်ပြန်လည်မွမ်းမံနေပါတယ်ဗျာ...ခဏလေး စောင့်ပေးကြပါခင်ဗျာ.. :)
မန်ဘာများအားလုံးရဲ့  အကြံလေးတွေ လိုချင်လို့ ဒီနေရာလေးမှာပဲ တစ်လက်စတည်း ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်နက်ရှင် နှေးသော မန်ဘာများ ဖိုရမ်ဝင်တဲ့အခါ လိုတာထက်ကြန့်ကြာနေတတ်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ရယ်၊ဖိုရမ်သို့ ရောက်လာတဲ့ Guest များအနေနဲ့ မူလစာမျက်နှာမှာတွေ့သော ဒေါင်းလုပ်လင့်များ၊Copy right ငြိနိုင်သည့် စာအုပ်များ၊Application များ အလွယ်တကူမတွေ့ရှိနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး ရာမညဖိုးလပြည့် နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ရေဒီယိုနဲ့ အခြားလင့်လေးတွေ မဖော်ပြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မန်ဘာအချို့ ထံမှ ရေဒီယိုပြန်ထည့်ပေးဖို့အကြံပြုချက်များကြောင့် ရေဒီယိုကို ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ကွန်နက်ရှင်နှေးတဲ့အခါ ချက်ရွန်းကို တစ်ခါတစ်ခါ ၀င်ဖို့က တော်တော်လေးကြာကြာစောင့်ရပါတယ်။
အဲလို စောင့်ဝင်ပြီးမှ အထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခါ ၀င်ရတာအလကားဖြစ်ရတာမျိုးတွေက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်။
အရင် ချက်ရွန်းအဟောင်းတုန်းကတော့ မူလစာမျက်နှာမှာတင် Chat room online user တွေကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ညီလေး ရာမညဖိုးလပြည့်မှ ချက်ရွန်းဒီဇိုင်းပြောင်းရန်အကြံပေးလာတာနဲ့ ယခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ ချက်ရွန်းကို ပြင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအခါ အရင်က မူလစာမျက်နှာမှာတင် မြင်နေရတဲ့ Chat room online user ပြပေးတဲ့ acess မရနိုင်တော့ပါဘူး။
အဲဒီ access ပြန်ရဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
နောက်ပြီး ညီလေး ရာမညဖိုးလပြည့် မှ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ ချက်ရွန်းလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပြောတာနဲ့ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ လုပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်..။နောက်တော့ အဲဒီချက်ရွန်းက ချက်ရွန်းသီးသန့်တင်ကို 55$ ပေးဝယ်မှရပါတယ်။နောက် ချက်ရွန်းထဲမှာတင် web cam များ၊Game များနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး chat နိုင်တဲ့အထိ feature များမှာလည်း တစ်ခုချင်းစီအတွက် သူ့ဈေးနဲ့သူပေးဝယ်မှ ရမယ့်ဟာမျိုးတွေပါ။
သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ..ကိုရေခါး ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီဖိုရမ်လေးတောင် နောက်ထပ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အလှူရှင်များရဲ့ ကူညီတဲ့ငွေများနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်အားပြုနေရတာပါ။ချက်ရွန်းသီးသန့် အလန်ကြီးလုပ်ဖို့ရန်အတွက် ငွေကြေးအခက်ခဲလေးတွေရှိနေပါတယ်။ချက်ရွန်းအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒီဆိုဒ်မှာ http://www.prochatrooms.com/purchase.php ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မန်ဘာများ နားလည်စေရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။တစ်ဦးတစ်ယောက်ကောင်း ဖြင့် တည်ထောင်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။အသင်းဝင်တိုင်း၏ အင်အားဖြင့် ရှင်သန်နေခြင်းဖြစ်သည် ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖိုရမ် ကြီးခိုင်မြဲခြင်း မခိုင်မြဲခြင်းသည် ဖိုရမ်အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့  လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တင် မလုံလောက်သလို၊မန်ဘာများအားလုံးမှ မိမိသက်ဆိုင်ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်တွေကနေ ၀ိုင်းဝန်းဖလှယ်ဆွေးနွေးနေကြမှသာလျှင် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ကြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်များနဲ့ စိုစိုပြေပြေလည်ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် မန်ဘာများအနေနဲ့ ဖိုရမ်ကြီး နွေးနွေးထွေးထွေးစည်ကားနေဖို့အတွက် ဆိုင်ရာကဏ္ဍလေးတွေက လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဒီ အကြံပြုရန်ကဏ္ဍလေးမှာ ရေးသားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊PM ပို့၍ဖြစ်စေ အကြံပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဗျာ............။ ။
ကျွန်တော်က ဒါဆို မတူတော့ဘူး... မဟိန်းလေးတို့နဲ့.
ရေဒီယိုက ဟိန်းလေးတို့ကဲ့သို့နှစ်သက်သူတွေလည်း ရှိသလို ကျွန်တော့်လို မနှစ်သက်သူတွေလည်းရှိပါတယ်
ကျွန်တော်က ဖိုရမ်ဝင်တာနဲ့ စအလုပ်ရှုပ်တာက ရေဒီယိုကို တပ်ပိတ်ရတာပါပဲ...
ကိုယ်က တခြားသီချင်းတွေနားထောင်ရင်း အိမ်တော်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ရင် သီချင်းသံတွေက ပြန်ဝင်လာပြန်ရော... တော်တော်စိတ်ညစ်ရပါတယ်....
ဥပမာ ကိုယ်က တခြား သီချင်းတွေနားထောင်နေရင်း mef ကို refresh နှိပ်လိုက်ရင် ရေဒီယိုကို ပြန်ပိတ်ရပါတယ်.
ဒီနေရာ ကျွန်တော်နဲ့သဘောထားကွဲလွဲသူများအား အထူးတောင်းပန်ပါတယ်...
ရေဒီယိုကို သဘောကျသူများအနေနဲ့ ရေဒီယိုရဲ့လိပ်စာကို မှတ်ထားပြီး အခြားလင့်တခုသီးသန့်ခေါ်ပြီး နားဆင်လျှင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့လို တခြားဟာများနားထောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ mef home ကို ရောက်တိုင်း ပိတ်ရပါတယ်..
ဖွင့်ဖွင့်ချင်း ရေဒီယိုက ပိတ်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်...နောက်တခုက ကော်နက်ရှင်ကျနေတဲ့အချိန်ဆို တော်တ်ာဖွင့်ရခက်ပါတယ်...mef ကတခြားဟာတွေထက် ကော်နက်ရှင်ကျရင် ဖွင့်ရပိုခက်ပါတယ်..
ရေဒီယို နားထောင်ပြန်တော့လည်း ကော်နက်ရှင်ကျရင် လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး...
အဲ့ဒါတွေက ကျွန်တော့ဘက်က အနေအထားကိုပြောကြည့်တာပါ...
ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ အများနဲ့နေရင် အများကို ဦးစားပေးရမှာပါ...
ွကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်... ချက်ရွန်းကိုတော့ ဒီထက်ပိုfeature စုံစေချင်ပါတယ်...ကျွန်တော် ဟိုဘက်မှာ ရှိနေခဲ့ရင် ထောက်ပံ့ပေးချင်ပါတယ်...
Yeah! I&#039;m so agree with him.
I also got the same problem. ;D ;D
ရေဒီယိုကို ကျနော်လဲ ကန့် ကွက်ပါတယ် ။
ကျနော်အနေနဲ့ ဖိုရမ်မျက်နှာစာကိုဖွင့်လိုက်တိုင်း အသံကြီးက တစ်ခါတစ်လေ ရုတ်တရက်ကြီးထွက်လာတော်တော်ဆိုးပါတယ် ။
ဒါကြောင့်လဲ ကိုဇော်တင်ပေးထားတဲ့ firefox auto play plugin ကိုသုံးပြီး ပိတ်ထားရပါတယ် ။
ဒါကြောင့်ရေဒီယိုပြန်ထည့်ဖို့ ကျနော်လဲ ကန့်ကွက်ပါတယ်
ဟင်... ဒါဆို plugin လုပ်ပြီးပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့...
အဲ့ plugin ကို ကျွန်တော် ခုထိနားမလည်သေးဘူးဗျ... ထားပါတော့
ကျွန်တော်အထင် ရေဒီယို ကို မဲခွဲပြီး လုပ်ရင် ကောင်းမလားလို့...
plug in က ရှိတာပေါ့ဗျာ ..
ဒီဖိုရမ်မှာပဲ အကိုဆွေးနွေးပေးထားတာရှိပါတယ် ။
အကိုလဲ အဲလိုပဲ အသံပိတ်ထားပါတယ် ..
အသံပိတ်ချင်ရင် အောက်လင့်မှာ အကိုဆွေးနွေးပေးထားတာရှိပါတယ် ။
ကျွန်တော်က Google Chrome သုံးတာဂျ... ;D
ဒီလိုပါ ဖိုရမ်ရဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ အောက်ကလိုလေးမြင်နေရလို့
တမင်လုပ်ထားသလား ဒါမှမဟုတ် တခုခုကြောင့်လားလို့ပါ ..
တစ်ခုခုကြောင့်ဆို Admin တွေအနေနဲ့ action ယူလို့ရအောင်ပါ
ဒီ page တစ်ခုပဲဖြစ်တာပါ http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/board,166.0.html
Little3278 ခင်ဗျာ ...
အဲဒါ ဖိုရမ် တစ်ခုခုကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး ..
ကိုရေခါး တမင်လုပ်ထားတာပါ ....
ဖိုရမ်မှ အုပ်ချုပ်သူများခင်ဗျား ...
ကျနော် စထားတဲ့ အောက်ကလင့်လေးမှာ ရှိတဲ့ Civil Engineering-စာအုပ်များနဲ့ ဆော့ဝ်များလို့ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များလို့ သတ်ပုံကို ပြန်ပြင်ပေးလို့ရရင် ပြင်ပေးပါလား။
တလက်စထဲ အဲ့ဒီ ပို့စ်လေးကို မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ... (သို့) အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစာအုပ်များ ခေါင်းစဉ် အောက်ကို ဖြစ်ဖြစ် ရွှေ့လို့ရရင် ရွှေ့ပေးပါလား။ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့က ကျနော်တင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို ရှာလို့မရဘူးလို့ ပြောပြောနေကြလို့ပါ။
ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ်ကော ..နေရာကော ရွေ့ထားလိုက်ပါပြီ ...
မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာ ကဏ္ဍအောက်မှာ ပါ ..
ကျနော် တစ်ခုလောက် တောင်ဆိုပါရစေ
ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကျေးဇူးခလုတ်လေးအကြောင်းပါ
ပို့စ်တစ်ကို ဖတ်ပြီးလို့ ကျေးဇူးတင်ချင်လို့ ကျေးဇူးခလုတ်ကို နှိပ်ချင်ရင် ပိုစ့်ရဲ့ အပေါ်ဖက်ကို ပြန်ပြန်သွားနေရလို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီခလုတ်လေးကို ပိုစ့်ရဲ့ အောက်ခြေနားလေးကို ရွေ့ပေးလို့ရရင် ရွေ့ပေးစေချင်ပါတယ်
အဆင်မပြေရင်လဲ ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူးဗျာ
template ကိုက အဲလိုဖြစ်နေလို့ပါ.. ကျနော် ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားကြည့်ဖူးပါတယ်.. နောက်ဆုံးတော့လည်း ရှုပ်ပါတယ်လေ ဆိုပြီး
ဒီအတိုင်းလေး ပဲ လက်ခံလိုက်ရပါတယ်.. :P
အေးကွယ် ... ဒါပေမဲ့လေ template ကိုက ပြင်မရဘူးဖြစ်နေတာကွယ် ။ သည်းခံပေးပါနော် ။
စကားမစပ် .. အိုင်ပီ ပြောင်းလို့ ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကောင်းကောင်းလေးပေးစမ်းပါအုံးဗျာ ။
ကျနော်လဲ အိုင်ပီပြောင်းချင်လို့ ။ ကိုမင်းထက်က မြန်မာကဆိုတော့လေ အခုလိုပဲ မြန်မာကမှန်းမသိအောင်လေ ရုရှားအိုင်ပီပြောင်းချင်လို့ ပါ ။
ဒီလိုပါခင်ဗျာ..ကျွန်တော့်ကောင်မလေးက ဒီကို ၀င်ဖို့ကိုပြောလို့ဝင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကို သူက ပြောပါတယ်။ကျေးဇူးနှိပ်လိုက်ရင် ပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်
ကိုရာမဖိုးလပြည့် ..အနော်က မင်းထွဋ် ပါ။မင်းထက်မဟုတ်ပါဘူးအစ်ကို။ ကျေးဇူး။ခုလိုခင်ရတာကို ။ရုရှားကပဲလား။
ကျတော်တို့ အခု ကိုရေခါးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ မှာ ကွန်ပြူတာကိုအထူးလေ့လာလိုက်စားတဲ့သူတွေနဲ့ ကွန်ပြူတာဆရာ့ဆရာကြီး များပါဝင်ပါတယ်
သင်တန်းတွေလည်းပေးနေသလို နည်းပညာအရမှာရော လူမှုရေးနယ်ပယ်တွေမှာ အထူးကိုအားကောင်းစွားနဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ဖိုရမ်ဆိုမမှားပါဘူး
ကျတော်တို့အခု မြန်မာအင်ဂျင်နီယာမှာ Services လေးတစ်ခုပေးနိူင်တဲ့ တော့ပစ်လေးတစ်ခုကို တင်ပေးစေလိုပါတယ်
တခြားမဟုတ်ပါဘူး ကျတော်တို့ဖိုရမ်အသင်းဝင် တွေအတွက် မိမိမှာရှိတဲ့ကွန်ပြူတာလေးတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် မပြင်တတ်တဲ့အခါ
ဆရာများသင်ပေးတာကို လိုက်လံမဆောင်ရွက်နိူင်တဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာလေးတွေကို သက်သာသွားစေချင်တာပါ
ဆရာများသိရှိပြီးသား Team Viewer ဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ အဲဒီလို ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာလေးတွေကို ဖြေဖျောက်ပေးမဲ့ အသင်းလေးတစ်ခု (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့လေးတစ်ခု စုဖွဲ့ပြီး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ကျတော် စကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်ပါဘူး သူများနားလည်အောင်လဲ ကောင်းကောင်းမပြောပြတတ်ပါဘူး နားမလည်းတာများရှိရင် ပြန်လည်းမေးစေလိုပါတယ် ကျတောဖြစ်ချင်တဲ့ စေတနာကို နားလည်ပေးနိူင်တဲ့သူများလည်း ဒီနေရာလေးမှာ ရှင်းပြပေးနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
http://www.mikekhelay.co.cc/2009/02/teamviewer.html ဆုံစည်းရာမှာ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်လေးနဲ့ပဲရှင်းပြချင်ပါတယ်
ကျတော်ရေးရင် ဖတ်တဲ့သူတော့မသိဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင်ရွာလည်လည်သွားလို့
ရေးသားသူ မိုက်ခဲလေး on 2:24 PM
ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကိုတော့ တော်တော်များများသိကြမယ်ထင်ပါတယ် ..လိုချင်တဲ့သူတွေရှိရင် အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ..သူရဲ့အသုံးဝင်ပုံကတော့ ကွန်ပျုတာ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ၀င်ရောက်ပြီး Remote လုပ်လို့ ရမယ်...Files တွေကိုမြန်ဆန်စွာနဲ့Transfer လုပ်ပေးနိုင်တယ်
လိုအပ်တာတွေကို ကိုယ့် စက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်...ကိုယ်နဲ့Connect လုပ်ထားတဲ့စက်ကလဲ ကိုယ့် စက်ထဲဝင်ရောက်ပြီး Remote လုပ်လို့ ရပါတယ်။အဲဒီ Application လေးကိုတော့ကိုယ့််စက်ရယ် Connect လုပ်မဲ့ စက်ရယ်မှာ Install တော့ လုပ်ထားရမှာပေါ့ ဗျာ..
အောက်မှာ အသုံးပြုပုံကို ရှင်းလင်းပြထားပါတယ်
(၄) ကတော့Connect to Partner ကို Click လိုက်ရင် Password တောင်းတဲ့ Box ကျလာရင် တောင်းထားတဲ့Password ကို ရိုက်ထည့်ပြီးသူများစက်ကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပါပြီ...
ကဲ တစ်လက်စတည်း ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကိုပြောခဲ့ချင်ပါတယ်
လင့်တွေပေးတဲ့အကြောင်းပါ အကို အမ ဆရာများခင်ဗျား အကိုပေးတဲ့လင့်တွေဟာ တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်
တကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်များ စာအုပ်များ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဖတ်ရတာ တကယ်ကို ပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေပါတယ်
ကျတော်အကြံပြုလိုတာကတော့ ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေပေးတဲ့နေရာမှာ မိမိ ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးဆွဲကြည့် ပြီးရင် ဒေါင်းရတဲ့လင့်ကိုပေးခြင်းပါ
ဥပမာ - ဂျာဗားစာအုပ်လင့်တစ်ခုပေးပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်
ပုံမှန်ပေးတာကတော့ http://ifile.it/1dm3pn6 ဒီလိုလေးပါ ကဲဒေါင်းလုပ်ဆွဲမယ်ဆို အဲဒီ ifile ကို အရင်သွား၊ ပြီးရင် ပုံလေးတွေရိုက်ထည့် ပြီးတော့မှ
တကယ်ဆွဲရတဲ့လင့်ကို ရမှာပါ ကဲဒီတော့ ကျတော်ကတကယ်ဆွဲရတဲ့လင့်ဆိုတာက http://dl1.s24.ifile.it/hyt08nkc/introduction_to_java_programming.rar ဒီလိုလေးပါ နှိပ်ကြည့်ကြပါ တစ်ခါတည်း ဆွဲပါတယ် ဘယ်ဝက်ဆိုဒ်ကိုမှမသွားတော့ပါဘူး
အဆင်မပြေဘူးလားဗျာ တခြားဟာကိုတော့ထားလိုက်ပါ rapidshare တို့လိုဟာမျုိးကြတော့ စဉ်းစာကြည့်ပါဦး
အကြာကြီးစောင့်ရတာလေ ဒါကလည်း ကျတော်က free သမားမုိ့ပါ အဲလိုလေးတွေကြောင့် ပုံပေးပြီးလင့်ထည့်တဲ့အခါ အမှန်အကန် ဆွဲ၇တဲ့လင့်ကိုပေးပေးစေလိုပါတယ်
တကယ့်လင့်ကိုသိချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ မေးနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကောင်းတယ်ဗျာ..ဆရာချစ်အကြံပြုတာ။နောက် ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းလေးပါဖွင့်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာအကြောင်းကို
ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးလို့သာသုံးနေတာ။ဘာမှသေချာသိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့က နားထောင်သူ သက်သက်ပါ။ အင်ဂျင်နီ
ယာ နောင်တော်တို့ ပိုပြီး အသိဥာဏ်ဗဟုသုတများကို ဖြန့်ဖြူးနိုင်ကြပါစေ
ပို့တင်မှားရင် ဘန်းပါသလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုကို မှားတောင်းထားတာရှိပါတယ်။ ကိုရာမဖိုးလပြည့် ကဘန်းမယ်ပြောလို့ပါ။ :(
မှား၇င်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ မသိလို့ပါနော်။ မဘန်းကြပါနဲ့ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ .. ပို့ စ်မှားတိုင်းဘန်းရင် အသင်းဝင်တွေ ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ။
ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ ၊ ဘယ်ကလဲ ၊ ပြီးတော့ အသင်းဝင်ဟောင်း ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိနေလို့ ပါပဲ ။
ကျနော်ဒီထက်မပြောပါရစေနဲ့ ။ မသိတာလဲ မဟုတ်ဘူး ။ တကယ်လို့ မကျေနပ်ရင် ခင်ဗျားဘယ်သူဆိုတာ ထုတ်ပြပါ့မယ် ။
ကျေးဇူးနော်.... :) ဘယ်သူကိုမှလည်းမစော်ကားပါဘူးခင်ဗျာ။အက်ဒမင်များခင်ဗျာ။ ဆော့ဝဲတောင်းတာကိုဘန်းမယ်တကဲကဲလုပ်နေပါတယ်။
သတိပေးတာပါ။ forum က ကျနော်တို့လုပ်နေတဲ့ဖိုရမ်ဆိုပေမယ့်
ဖိုရမ်အပေါ်စေတနာထားပြီး စောင့်ရှောက်ခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုယ်ကို စေတနာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
ဖိုရမ်မှာအသင်းဝင်မဖြစ်သေးခင် Sign up လုပ်တဲ့အခါမှာ ဖိုရမ်ကနေတောင်းတဲ့ personal information လေးတွေက နည်းနေသလားလို့ပါ။
တစ်ချို့ အချက်အလက်လေးတွေထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်ရင်ပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ တခြားအခက်အခဲမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့။
ဥပမာ - ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ဆိုတဲ့အချက်အလက် (Gender)........
ဒီ information က လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နာမည်ပေးတာတွေက nick name တွေဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခါတရံမှာ သူတို့ရေးထားတဲ့ ပိုစ်တွေကို ပြန်စာရေးရင် မှားပြီးရေးတာမျိုး ( ကို သို့ မ) မဖြစ်အောင်ပါ။ ပြန်စာရေးခါနီးမှာ သက်ဆိုင်ရာအသင်းဝင်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုသွားကြည့်တော့ ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပါ.....တဲ့
နောက်တစ်ခုက မွေးနေ့ ၊မွေးလ၊ ခုနှစ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်ပါ။
အကို၊ ညီ၊ အစ်မ၊ ညီမ စသည်ဖြင့် ဘယ်လို့မျိုးသုံးနှုန်းသင်သလဲဆိုတာအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်လို့ပါ။ အသင်းဝင်ဟောင်းတွေကတော့ information တွေရှိပေမဲ့ အသင်းဝင်အသစ်တွေကြတော့ ဘယ်မှသွားပြီး update လုပ်ရမှန်းမသိတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
update လုပ်ရမဲ့နေရာကိုသိပေမဲ့ update လုပ်ဖို့ မလိုဘူးလို့လဲထင်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် စိတ်ထင်တော့ Personal information တွေက မနည်းဘူးဗျ .. မင်ဘာတွေ ကိုယ်တိုင်က မဖြည့်ကျလို့ ဖြစ်တာပါ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ပြောတဲ့ ယောကျာ်လေး မိန်းကလေး ၊ နောက်ပြီး မွေးသက္ကရာဇ် စတာတွေ အားလုံးက Personal information မှာ ပါပြီးသားတွေပါ။ အဲဒီအချက်အလက်တွေက မင်ဘာတွေက ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရပါမယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် မဖြည့်မနေရလို့တော့ မလုပ်ထားတဲ့ အတွက် တချို့မင်ဘာတွေက မထည့်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကျနော်ပြောချင်တာက အဲဒီ Personal Information ကို မဖြစ်မနေဖြည့်ဖြစ်သွားအောင်လို့၊ sign up လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကတည်းက တစ်ခါတည်း compulsory အဖြစ်ထည့်ပေးခဲ့ရင် user တွေအနေနဲ့ ဖြည့်ဖြစ်သွားမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါခင်ဗျာ။
အဲဒါလေးကို ကျွန်တော်တို့ ရှာကြံလိုက်ပါ့မယ်အကို ..
နောက်ထပ် features တွေလဲ ထပ်ထည့်ဖို့ ရှိပါတယ် ..
အခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးအကို ..
ဖိုရမ်မှာ exchange rate ကိုဖိုရမ်မူလမှာတင်ပေးထားရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ် နဂိုကတင်ပေးထားတာတွေ့မိသလိုပဲ ပြီးတော့ အခွင့်အလမ်းအနေနဲ့ဥပမာ scholarship ဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘာအခွင့်အလမ်းပေါ်တယ် ဘယ်နိုင်ငံကိုလေ့လာရေးခေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကို ဖိုရမ်မူလမှာတင်ပေးထားရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ် ဖိုရမ်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူအများစုက အဲဒါကိုလိုက်ရှာနေရသလိုဖြစ်နေတယ် ပြီးတော့ရှာတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ကျသွားလို့ဖောင်မတင်ရတာနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်နေတယ် အဲဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူး အခွင့်အလမ်းကိုသေသေချာချာ အခွင့်အလမ်းနဲ့တူအောင်မိမိရရဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် ရိုင်းသွားရင်ဆော်ရီးနော် ဖိုရမ်ကြီးပိုမိုပြည့်စုံအောင်ထောက်ပြပေးတာပါ
်သဘောကျနှစ်သက်သော Post များရဲ့ address များကို Favorites အဖြစ် tag လုပ်ပြီးသိမ်းထားလို့ ရနိုင်ရင်ကောင်းမလားလို့ ပါ။ အပေၞကပြထားတဲ့ မူလ ဖိုရမ် အကူအညီ tabs တွေထဲမှာ Favorites tab တခုသွင်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ကောင်းမလားလို့ ပါ။
အကြံပေးတာ ကျေးဇူးအကို ... ညီလေး ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်အကို ...
ဟုတ်တယ်အကိုရေ အဲဒီTagလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းမှာပါ ကျွန်တော်လည်းပြောချင်နေတာ ညီလေးAndrewSwayပြောပြသွားတာလေးကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးပါအကိုဖိုးလပြည့်ရေ
ဝေဝါး တို့ကတော့လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ကို AndrewSway က တော့အကိုအကြီးဆုံးထက်တောင်ကြီးဦးမယ်။ အကို AndrewSway ရေ မသိနားမလယ်တဲ အမိုက်အမဲလေးမို့ ခွင့်လွတ်လိုက်ပါနော်။
အမချစ်ဆူးလေးရေ အမပြောမှပဲသိတော့တယ် ဆော်ရီးနော် :4: အမိုက်အမဲလေးမို့ခွင့်လွတ်ပါနော် မှားတဲ့အခါလည်းမှားပေမပေါ့နော် ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲပေါ့ဗျာ ဟုတ်ဘူးလား :4: :4:
:?အစ်ကိုတို့ရေ............. ဖိုရမ် မမ်ဘာ စာရင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်မည့် နေရာလေးသီးသန့်ရှိရင်.......... ကောင်းမလားလို့
ဟုတ်ကဲ့ ... ဖိုရမ်မန်ဘာတွေစာရင်းကိုတော့ အထူးအသင်းဝင်နဲ့အထက်ပဲ ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ..
ရေဒီယိုလေးကို ဘယ်စာမျက်နှာကိုပဲသွားသွား ပါလာအောင်လုပ်ထားလို့မရ၀ူးလားဗျ :?
ရရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ ;D
အဲ့လိုတော့ ရဘူးဗျ :e :e
နဲနဲဝင် လျှာရှည်ကြည့်ချင်တယ်။ ရေးထားတဲ့ပိုစ့်တွေထဲက တချို့ ဟာတွေဆိုရင် တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် ..ဥပမာ.. လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာထဲက ဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာတွေ .... (တခြားနည်းပညာဆိုင်ရာThread တွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။) အဲဒီဟာတွေကို အချိန်ရတဲ့ သူတွေက လက်ခံ အနေနဲ့ Copy လုပ်ထားပြီး တစ်စုတစ်စည်းထဲသိမ်း.... PDF နဲ့ လုပ်ထားကြရင်ကောင်းမယ်ဗျ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ပုံတွေတင်တဲ့ဆိုက်တွေ Hosting တွေက အချိန်တန်ရင် တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို ဖျက်ပစ်မှာပဲ၊ နောက်တစ်ချက်က အခြေအနေပေးတဲ့အခါ အခုလို Discuss လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို Print ပြန်ထုတ်ပြီးစာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။ ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေလဲ အေးအေးဆေးဆေး စိမ်ပြေနပြေဖတ်လို့ ရတာပေါ့။ နောက်ပြီးဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေကလဲ ကိုယ့်ဆီမှာ သိမ်းထားပေးကြဖို့ လို မယ်ထင်ပါကြောင်း အကြံပြု လျှာရှည်လိုက်ပါတယ်ခင်ည.....။
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ပဲ ဒီကိုရောက်တယ်ခင်ဗျ အကြံတစ်ခုပေးချင်လို့ပါ
ချက်ဘောက်ကြီးက ဘလော့ဂ်နဲ့တူနေတယ် စာတွေကအောက်ကနေ အထက်ကိုတက်နေတယ် အပေါ်ကနေ အောက်ကိုကျတာ ပိုမကောင်းဘူးလားလို့ အကြံပေးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Forum တောလယ် ၊ အပြောကျယ်
တင်ချင်ပါဘိ ၊ များကျေးဇူး
ကျေးဇူး Tag ကွယ် ၊ Post ထက် ၀ယ် ၊
ရှေ့ ဆက် ကယ် ၊ သွားချင် ဇောရယ်နဲ့၊
ကျေး Tag ဆီ ၊ တက် မလွယ်ချင် တာကြောင့် ၊
ဇူး Tag ကို ၊ အောက်ကို ပို့ ရင်တော့ 
များ လိမ့်Thank You.
အချိန်ရရင် ကျွန်တော့် အဲ့ဒီကျေးဇူးခလုတ်ကို ပြန်ပြောင်းနိုင်အောင် လုပ်ထားလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ ..
အခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။
တစ်ယောက် ယောက်က နေရာမှားပြီး ပို့စ်ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအရာတူလို့ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပို့စ်ကိုနေရာရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကို ကြီးကြပ်ရေးမှုးတွေက နေရာရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအဲဒီနေရာလေးမှာရေးထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုနေရာရွှေ့တဲ့အကြောင်းရေးထားတာလေးတွေကို အချိန်တစ်ခုလောက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖျက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစ်လလောက်အထိတော့ အဲဒီလိုရွှေ့တဲ့ပို့စ်လေးကို ထားလိုက်ပေါ့။ တစ်လလောက်ဆိုရင်သုံးတဲ့ အသင်းဝင်တွေအနေနဲ့ အဲဒီပို့စ်ရဲ့လင့်အသစ်ကို သိနေပြီလို့ယူဆလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ဖျက်လိုက်တာက ပိုပြီးတော့ ကောင်းမယ်လို့အကြံပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဥပမာ အနေနဲ့အောက်ကလင့်ဆိုရင် October 23, 2008 ရက်နေ့ကနေရာရွှေ့ပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒါလေးဆိုရင် ဖျက်လို့ရလောက်ပြီလို့ထင်မိပါတယ်ဗျာ။
အမြဲတမ်းတိုးတက် ရှင်သန်နေတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒ တစ်ခုတည်းပါ။ :2: :2: :2:
ဖော်ပြပါလင့်အား ဖယ်ရှား ပြီးစီးပါကြောင်း။
အကို ရေ၊ ကျေးဖူးပါနော်။
ကျွန်တော် အကြံတစ်ခုလောက်ပေးပါရစေ ............... ဖိုရမ်အတွက်အကျိုးမရှိရင်လည်းဒီအကြံကို လက်မခံပါနဲ့ခင်ဗျာ ......... တချို့မမ်ဘာတွေအနေနဲ့ မမ်ဘာဝင်ပြီးတော်တော်ကြာတာတောင် ဖိုရမ်ထဲပြန်မ၀င်ကြဘူးနဲ့တူတယ် ......... အဲဒီလိုမမ်ဘာတွေအတွက် သူတို့ account ကိုထိန်းသိမ်းပေးထားရတာ ဖိုရမ်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ် ............ အဲဒီလို account တွေမဖောင်းပွရအောင် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုခုတော့ ထားရမယ်ထင်တယ် ......... ဥပမာ - 1လမှာ ဖိုရမ်ထဲ ၀င်ကြည့်ချိန် ဘယ်လောက်ရှိရမယ် (သို့မဟုတ်) 6လမှာဆိုရင် post အရေအတွက်ဘယ်လောက် ပြည့်ရမယ် ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ဒီထက်ကောင်းမယ့် အကြံလေးတွေလည်း တခြားသောမမ်ဘာဝင်များမှ ပေးပေးကြပါအုံးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ..........
ဟုတ် ကဲ့ပါ အကိုသန်းဇော် ပြောတာလဲ ဟုတ် ပါတယ်
သူတို့ အကောင့်တွေကိုထိန်း သိမ်း ပေးထား ရတာ ဖိုရမ် အတွက် အကျိုး မရှိပါဘူး........
ကျွန်တော် အကြောင်းလေး ကိုကြား ဖြတ် ပြီ ပြေချင်ပါတယ်
ကျွန်တော် ဒီ ဖိုရမ် မှာ register လုပ် ပြီး ပို့5ခု တင်တယ်
အဲဒီနောက်ပိုင်း မဝင် ဖြစ်တော့ပဲ အလုပ်ထဲမှာ ပဲချာလပတ် လည်ရမ်း နေရတယ်...
ဖိုရမ် နှစ်ပတ်လည်တော့မှ ပြန် ဝင် ဖြစ်တဲ့သူပါ........
ခုတော့ဖိုရမ် ကို တော် တော် သံယောဇဉ် ဖြစ်မိနေပါ ပြီ
အမှားပါ သွား ရင် ခွင့်လွတ် ပေးကြပါ အကိုတို့ ခင်ဗျာ ......
ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ သဘောထားကိုလဲ ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး ။
ကျနော်တော့ ဒီအကြံပေးချက်လေးကို သဘောတူထောက်ခံပါတယ်။ တခုခု လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမျိုး ACTION ယူသင့်သလဲဆိုတာကိုတော့ အားလုံးသဘောတူညီမှုရမှ ထပ်ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့ ။
အဓိကကတော့ လုံးဝပို့စ်မတက်ဘဲ ZERO ပို့စ်ဖြစ်နေတဲ့ မန်ဘာတွေကိစ္စကို ပိုပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ အခုလောလောဆယ် ... မန်ဘာအရေအတွက် ... 11090 ရှိနေပေမယ့် ... တနေ့တနေ့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသူ 40-60 လောက်ဘဲ Average ဖြစ်နေတာလေးကို ကြည့်ရင်လဲဘဲ သိနိုင်ပါတယ်။ လူများပြီး (စုစုပေါင်း အသင်းဝင်များပေမယ့်) ပွဲမစည်ဘူးလို့ပြောရင်တောင် ရပါတယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် &gt; အသင်းဝင်များ။ &gt; (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php?action=mlist) ဆိုတာလေးကနေ သွားကြည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ .... ။ ZERO ပို့စ်ဖြစ်နေကြတဲ့ မန်ဘာတွေက တပုံကြီးဖြစ်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီ ZERO ပို့စ်ဖြစ်နေကြတဲ့ မန်ဘာတွေကိုကြည့်ရမှာ အကြမ်းဖျင်း ၂ မျိုး နှစ်စား ထပ်မံခွဲခြားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကြားဖြစ်နေကြသူတွေလဲရှိကြမှာပါ။
(၁) ဖိုရမ်ထဲမှာ ၀င်ရောက်လည်ပတ်ပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး လိုအပ်တာတွေယူငင်သွားပေမယ့် ... ဘာမှပြန်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ... အယူသက်သက် လာရောက်လည်ပတ်နေကြသူတွေနဲ့
(၂) တချို့ကတော့ မှတ်ပုံတင်ပြီးကတည်းက လုံးဝမရောက်သူတွေ (သို့) သိပ်မရောက်ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ နဲနဲကြည့်လို့ရအောင် Random လျှောက်ကြည့်မိတော့ .... (လူအကုန်လိုက်ကြည့်ဖို့မလွယ်လို့ပါ)
နံပါတ် (၁) အမျိုးအစား (နာရီနဲ့ချီပြီး ၀င်ရောက်လည်ပတ်ကြသူတွေ but No post)
http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php?action=profile;u=9908;sa=statPanel (7 နာရီနှင့် 12 မိနစ်။)
နံပါတ် (၂) အမျိုးအစား (No post &amp; မိနစ်အနည်းငယ် (သို့)0မိနစ် သာဝင်ရောက်လည်ပတ်ဖူးသူတွေ)
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီအကြံလေးကို ထောက်ခံပါတယ်..အသင်းဝင်စာရင်းတွေလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီလိုတွေက အများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်..ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြပါမယ်..သူလဲ အသင်းဝင်ထားတာပါ..သူဘာနာမည်နဲ့ဝင်ခဲ့လဲဆိုတာမေ့သွားလို့ဆိုပြီး ဟိုတစ်လောကတင် အကောင့်အသစ်ထပ်လုပ်ပြီး သုံးပါတယ်..အဲဒီလိုမျိုးတွေလဲရှိမှာပါ..နောက်ထပ်ရှိနိုင်တာလေးတွေကတော့ အင်တာနက်ကြုံလို့လာသုံးရင်း အသင်းဝင်သွားပြီး နောက်တစ်ခါထပ်သုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ သူဝင်ထားမှန်းတောင်မမှတ်မိတော့တဲ့သူမျိုးပေါ့..အဲဒီလိုတွေအများကြီးရှိနေမှာပါ.ခုနက ကျွန်တော်ပြောတဲ့သူငယ်ချင်းဆို အကောင့်(၂)ခုသုံးတာမဟုတ်ပေမယ့် (၂)ခုဖြစ်သွားပြီလေ.ပြီးတော့ ကိုချစ်သီးပြောတဲ့ အယူသမားတွေအတွက်တော့ ပို့စ်နဲ့ကန့်သတ်ပြီး ဒေါင်းခွင့်ပြုတာမျိုးပဲကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်..Newbie တွေအတွက်တော့ အချိန်တစ်ခုကန့်သတ်ပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ပဲထင်ပါတယ်..ကျွန်တော်တို့ကတော့ ထောက်ခံပါတယ်..အားလုံးလဲ ထောက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..
Inactive member တွေကို ဖျက်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်လည်းထောက်ခံပါတယ်။
ကျနော့်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ Active မဖြစ်တဲ့ member တွေ ထောင်ချီပြီး ရှိနေတဲ့ ဖိုရမ်ထက် Active member တစ်ရာလောက်ဖွဲ့စည်းထားတာကို ပိုပြီးတော့ လိုလားပါတယ်။
ဖိုရမ်မင်ဘာ အရေအတွက် များတိုင်းလည်း ဖိုရမ်က ကောင်းမွန်တိုးတက်လာတယ်လို့မယူဆပါ။
ကျနော်တို့ဖိုရမ်မှာ ရေးစရာ တွေ ဒီလောက်အများကြီးရှိတဲ့အထဲက ပို့စ် တစ်ခု မှ မရေးထားတာကတော့ သဘာဝ မကျလှပါ။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်က နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုတ်တွေချည်းပဲဖွင့်ထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် တကယ်တမ်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးစရာတွေ အများကြီးပဲ မဟုတ်ပါလား။
နောက်ဆုံးဘာမှမဟုတ်တောင် Gmail ကနေ လက်ခံရတဲ့ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေလောက်တော့ ပြန်ပြီး ဝေမျှလို့ရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဖိုရမ်ရဲ့ ဒေတာဘေ့စ် ထဲမှာ Inactive member တွေကို ထည့်မထားပါနဲ့တော့ဗျာ။
ကျနော်တို့ကသာ သူတို့အတွက် ဖျက်သင့်မဖျက်သင့်စဉ်းစားနေတာပါ။ သူတို့ကတော့ ဖျက်လိုက်ရင်တောင် ဖျက်လို့ဖျက်မှန်းသိမှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
တခြားအသင်းဝင်များ ၊ အားကိုးရသော Senior memberများ ၊ အထူးအသင်းဝင်များ နဲ့ ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူများကိုလဲ ..
ကာလကြာရှည်စွာ ပို့စ်လုံးဝမရေးကြသော ... ZERO post မန်ဘာများအတွက် ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးများကို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ :7: ။
pooh ကလေး လဲ ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ ..
အကြိုးမပြုသော ပိုစ့်လုံးဝ ရေးသားထားချင်းမရှိသော မန်ဘာများကို တရားဝင်
ဖျက်သိမ်းသင့်ပါကြောင်း ပြီးတော့ မန်ဘာ စည်းကမ်းချက်ဆိုပြီးတော့ လဲထည့်သွင်း
သင့်ပါတယ် ( ဥပမာ တစ်လ ကို ပိုစ့် ဘယ်နှစ်ခုပေါ့နော် အဲလိုမျိုးလေးပါ အကြံပေးရုံ
ကျွန်တော်လဲ စစရောက်တုန်းက ဆိုရင် ဘယ်က စရေးရမှန်းတောင် မသိပါဘူး
ဒါနဲ့ ပဲ မိတ်ဆက်စာ တစ်စောင် ကို စရေးခဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းတော့ ရေးရင်း
ရေးရင်း နဲ့ ပဲ ရေးစရာတွေက များလို့သာ လာပါတော့တယ် ..
ခု ဆိုရင် တစ်နေ့ ကို5ခု လောက် မရေးလိုက်ရရင်ကို ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်
မိ ဖြစ်နေပါပြီ အတွေ့အကြုံ နုနယ်သေးတာ မို့ အမှားလေး တွေပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ
ဖိုရမ်ကို သံယောဇဉ်ကြီးသော pooh ကလေး
အဓိကကတော့ forum မှာ အကျိုးရှိရှိ သုံးတဲ့သူတွေများစေချင်တာ လို့ထင်ပါတယ်..
အခုကိစ္စက member အသစ်တွေအတွက် တစ်လဘယ်လောက် post ရှိရမယ်...မရှိရင် warning ပေးမယ်..မလိုက်နာရင်ရင်ဖျက်မယ်..
တစ်မျိူးကြီးပဲဗျ..စည်းကမ်းချက်ထဲမှာ....အဲ...၃ လလောက်ကျော်လို့မသုံးတဲ့ user ..ဆိုရင်တော့ warning ပေးပြီးဖျက်ပေါ့...
ီနိုင်ရင်ရေးပေးဖို့ pm ပို့တာမျိုးလေးပေါ့..မရေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်...အဓိကက post တစ်ခု ၂ခုတင်ပြီး သုံးလလောက် active မဖြစ်တာမျိုးလောက်ကိုပဲ..
လုံးဝမ၀င်တာလား...information ယူပြီး...pm ပို့ပြီး..ဆောင်ရွက်တာ အသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်...
အဓိကက ကျွန်တော် ပြောခဲ့ဘူးသလို flyer လေးတွေနဲ့...GTC လို ကျောင်းတွေမှာ အသိပေးတာမျိုးတွေလုပ်သင့်ပါတယ်..
့မြန်မာက လူတွေစုပေါင်းလုပ်ပေးမှရမှာပါ ..အဲဒီအတွက် တစ်ကယ်ဖြစ်စေချင်ရင် အဓိက ဖြစ်စေချင်တဲ့သူတွေ
အဲဒီလုပ်တဲ့သူတွေကိုလဲ..တတ်နိုင်သလောက် ကူညီထောက်ပံ့ရမှပါ....ကျွန်တော်က မလုပ်နိုင်လို့မပြောတာပါ...
အခုဟာက ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပဲ....တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး လည်နေမှာပါ..အဓိက target ထိအောင် အရေးကြီးတာတွေလုပ်ရမှာပါ..
နောက်မှလိုက်ရမှာက အရင်လုပ်နေရင်လည်နေမှာပါပဲ....အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ... :)
ကျွန်တော့် အထင်ပေ့ါနော်.. ဖိုရမ်တိုင်းနီးပါးမှာ member အရေအတွက် ဘယ်လောက်များများ အားလုံး ဆွေးနွေးခဲ့သလို တကယ် active ဖြစ်တဲ့ member တွေက စုစုပေါင်း member အရေအတွက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် percentage နည်းလွန်းပါတယ်…။ ဥပမာပေါ့နော်…. ကျွန်တော်ဆိုရင် ဖိုရမ် တွေ တော်တော်များများကို လည်ပတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဒီ MEF မှာပဲ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်… ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ၀င်ရောက်မဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ ဖိုရမ် တစ်ချို့ကရော ကျွန်တော်နဲ့ တစ်သားထဲ မဖြစ်ဖူးလား..???။ မဟုတ်ပါဖူး…။ english ဘာသာနဲ့ပဲ ခွင့်ပြုတဲ့ forum တွေရော အခြား ဘာသာနဲ့ သုံးတဲ့ forum တွေကိုပါ ကျွန်တော် ရံဖန်ရံခါ ၀င်ပါတယ်…။ ပညာတွေလည်း အများကြီးရပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နိုင်ငံခြား forum တွေမှာ ဆွေးနွေးတာ တစ်ခုတစ်လေ ရှားရှားပါးပါးပါ။ မရှိလှပါဖူး..။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မြန်မာလိုပဲ တတ်နိုင်တယ်လေ :D ။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ account ဟာ အဲ့ဒီ forum တွေမှာ no post ပဲ ဖြစ်နေတာပါ…။ :e
နောက် တစ်လ နေလို့ တစ်ခါ မရောက်တဲ့ forum တွေလည်း ရှိပါရဲ့..။ ကိုယ် အဆင်ပြေတဲ့အခါ ၀င်ဖတ်ရင်း ပညာယူလိုက်တာပဲ ရှိပါတယ်…။ အဓိက ဘာသာစကား အခက်အခဲ technical term တွေနဲ့ နောက် ကိုယ့်ရဲ့ confident နဲ့ပဲ ဆိုင်မှာပါ…။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ အားမရတာတွေ အများကြီးပေါ့…။ :&#039;(
ဒိလိုပဲ MEF မှာ ၀င်ရောက်နေတဲ့ member အချို့မှာလည်း post ဟာ zero post တွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ..။ နောက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အခြေအနေအရ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းလည်း ကွာခြားသွားမှာပါ…။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ဖောဖောသီသီ များလာတယ်ဆိုတာကလည်း ဒီ နှစ်ပိုင်းမှ မဟုတ်လား…။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နယ်တွေမှာဆိုရင် အင်တာနက်က အရမ်းနှေးပြီး တစ်မြို့လုံးမှ တစ်ဆိုင်ရယ်…။ ကျွန်တော် သိသလောက် တစ်ချိ့ ညီမလေးတွေ မောင်လေးတွေ (ဂျူနီယာတွေပေါ့) သူတို့ဆို အုပ်စုလိုက်လေး ၀င်ရပါတယ်…။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုဖို့ ခုံကရော ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲလေ….။ ဒါ့အပြင် သုံး လေး လနေလို့ တစ်ခါ မ၀င်နိုင်တာကရော ဘာကြောင့်လဲ…။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ခံစားမိတာပေါ့နော်…။ ::)
ကျွန်တော်သာဆိုရင် တကယ်လို့ ကွန်နက်ရှင်လည်း အနည်းငယ်ခက်ခဲမယ်..။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အားလပ်ချိန်နဲ့ ကွန်နက်ရှင် အဆင်ပြေမှုနဲ့သာ မကိုက်ညီဖူးဆိုရင် ကျွန်တော် ဖိုရမ်ကြီးကို သံယောဇဉ်ရှိပေမယ့် ၀င်နိုင်မှာလား??? ကျွန်တော်မသေချာပါဖူး…။ ကျွန်တော် ဒီ ဖိုရမ်နဲ့ တစ်လကျော် နှစ်လ နီးပါးလောက်ကို ကင်းကွာဖူးပါတယ်…။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော် ရန်ကုန် ပြန်ဆင်းလာဖို့တောင် တော်တော် ပြန်စဉ်းစားနေပါတယ်..။ တကယ်လို့သာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရန်ကုန် ပြန်ဆင်းမလာဖြစ်ဖူးဆိုရင် ကျွန်တော် ဖိုရမ်ကြီးနဲ့ ဒီထက်မက ဝေးကွာသွားမှာ အသေအချာပါပဲ…။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ် ပြန်အသုံးပြုလို့ ကိုယ့် account က သုံးမရတော့ရင် ကျွန်တော် ဘယ်လို ခံစားမိမှာလဲ…??? :( ကျွန်တော် မပြောတတ်ပါဖူး..။ ဒိလို အခက်အခဲတွေအများကြီးက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့မိလို့ပါ…။
ဒါကြောင့် ဒီလို zero post ဖြစ်နေတာဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို နည်းနည်း ဆန်းစစ်ပေးဖို့တော့ လိုမှာပါ... :e
ဒီအတွက် သူတို့တွေ ဘာကြောင့် zero post တွေ ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ အထက်မှာ ကို pargyi ပြောသလို educate လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။ အပေးတွေ အယူတွေထက် ကျွန်တော်တို့တတွေ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ် သိနားလည်မိသလို အခြားသူတွေလည်း နားလည်စေချင်လို့ ကိုယ်ရဲ့ နားလည်မှု လွဲမှားတဲ့ အမြင်တွေဆိုရင်လည်း အခြားသူတွေရဲ့ ဆွေးနွေးမှုကနေ ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ မဟုတ်ဖူးလားနော်…။ ဒီတော့ ကျွန်တော့် အထင် active ဖြစ်နေတဲ့ member တွေကလည်း ဒီထက် ပိုပြီး forum အတွက် ကြိုးစားရင် inactive ဖြစ်နေတဲ့ member တွေကို အယူဆိုတာထက် သူတို့ကို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ တွဲခေါ်ကြရင် မကောင်းဖူးလား…။ :7: ကိုယ့် မိခင်ဘာသာကို အသုံးပြုတာပဲလေ… တစ်ချိန် zero post ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေထဲကနေ ဒီ ဖိုရမ်ကြီးမှာ တစ်သက်တစ်အား ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး လာကြမယ့်သူတွေ အများကြီး ပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ် မဟုတ်ဖူးလားနော်…။ :)
နောက်ဆုံး zero post ပဲ ဖြစ်နေပါစေ.. ကိုယ် သိနားလည်သမျှ အနည်းငယ်ကို ကိုယ့်လို သူတို့လည်း သိနားလည်လို့ လက်တွေ့မှာ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သွားခဲ့ရင်ကို ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါပြီ...။ ဒီလို ပြန်လည် apply လုပ်သွားတာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မသိလိုက် မမြင်လိုက်ပေမယ့် apply လုပ်သွားတဲ့သူနဲ့ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လောက်အကျိုးရှိသွားမလဲဆိုတာ တွေးမိရုံနဲ့တင် ကိုယ် ပေးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီလေ... :)
တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီလို zero post ဖြစ်နေတဲ့ user တွေက များလွန်းလို့ forum မှာ အနှောက်အယှက်တွေ ရှိမရှိဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ network ပိုင်းကို နားမလည်လို့ မသိပါဖူး။ :( ဒီအချက်ကို ထည့်မစဉ်းစားမိပဲ ကျွန်တော့် အမြင် တစ်ခုတည်းကိုယ်ပဲ ဆွေးနွေးမိလို့ လိုအပ်သွားတာ အမှားအယွင်း ပါသွားတာဆိုရင်လည်း အားလုံး နားလည်ပေးမှာပါလို့ ယုံကြည်မိပါတယ်… :)
ကျွန်တော့အမြင် ကိုပြောရရင် မရေးပေမယ့် ၀င်ဝင်ကြည့်နေသေးတဲ့ member တွေကိုတော့ မဖျက်စေချင်ပါဘူး။ Forum လုပ်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက Engineer ဘာသာရပ်တွေ တိုးတက်ပြန့်ပွာ ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ တစ်ခါဝင်ကြည့်ရင်လည်း တစ်ခါ အကျီုးရတာပေါ့၊ တစ်ခါကုသိုလ် တိုးတာပေါ့ဗျာ။ Active မဖြစ်တဲ့ member တွေမှာလည်း ဆက်သွယ်ရမယ့် email တွေကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ဖြုတ်ဟေ့ ဖြုတ်ဟေ့ ဆိုပြီးမလုပ်ပဲ သူတို့ရဲ့ဆန္ဓကိုမေးသင်ပါသေးတယ်လေ။
ကျနော်ပြောတဲ့ Inactive member ဆိုတဲ့အထဲမှာ zero post member ကိုသာဆိုလိုပါတယ်။
zero post မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်းလွယ်ပါတယ်ဗျာ။ မိတ်ဆက်စာလေးရေးလိုက်ရင်ကို ရနေပြီပဲ ။ အဲဒီတော့ ပို့စ်တစ်ခုမှ မရေးပဲနဲ့ ၃ လ လောက်နေရင်တော့ ဖျက်သင့်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
စည်းကမ်းချက်လေးတော့ထုတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်။ စည်းကမ်းချက်မထုတ်ပဲနဲ့လုပ်ရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။
နောက်တစ်ခုက တစ်လကို တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ဖိုရမ်ကနေ အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖိုရမ်ကနေပြီးတော့ News and News letter လိုမျိုးလေးပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
အခုဒီလဆိုရင် ဖိုရမ်ရဲ့အလှူပွဲလေးအကြောင်းကို ပို့လို့ရမယ်ပေါ့။ အဲဒါဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ ဖိုရမ်ကို အရင်ကမသုံးဖြစ်ရင်တောင် လာတော့ကြည့်ဖြစ်မှာပါ။
အခုလို ဖိုရမ်အတွက် ၀ိုင်းဝန်းအကြံပြုကျတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
အားလုံးအကြံပေးတဲ့အတိုင်း inactive member တွေကို ဘယ်လိုကန့်သတ်ကျမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါတယ် ။
ဥပမာ ရက် ၃၀ ကျော်ကျော် မ၀င်ရင် ပထမအကြိမ်မေးပို့အကြောင်းကြားမယ် ၊ ဒုတိယ ရက် ၃၀ ကျော်ရင် auto delete မယ်ပေါ့ ..
ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုတွေ လိုက်စမ်းကြည့်တာတွေ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ် ။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ဘာသာ နည်းပညာအပိုင်းဘက်ကနေ လုပ်ကျမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ လိုက်စမ်းသပ်ကြည့်တာပါ ။
အခုထိ အဆင်မပြေသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ် ။
inactive မန်ဘာများကို delete လုပ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော့်အမြင်အနေနဲ့ကတော့ မလုပ်ချင်ပါဘူး ။(တစ်ယောက်အမြင်တစ်မျိုးစီပေါ့)
ပို့စ်မတင်ကျတဲ့မန်ဘာတွေအနေနဲ့ တစ်ချို့တစ်လေက မရေးဖြစ်ကျပေမဲ့ ၀င်ဖတ် စားသုံးတဲ့သူတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ် ။
ကျွန်တော့်အသိတွေမှာလဲ တော်တော်များများ အဲလိုတွေ ရှိကျပါတယ် ။ ပြီးတော့ တော်တော်များများက လိုချင်ကျမှာသာ ဖိုရမ်ထဲကို ပြေးလာတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ် ။
ဖိုရမ်ကို သံယောဇဉ်ကြီးကျတဲ့သူတိုင်း အခုလို ခံစားရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လဲ နားလည်သဘောပါက်ပါတယ် ။
အားမလို အားမရဖြစ်တာမျိုး ၊ ဒါပေမဲ့ အခုလို မန်ဘာများတော့လဲ ဖိုရမ်ဒေတာဘေ့စ်အတွက် ပြသာနာအကြီးအကျယ်မျိုးလောက်တော့ မဖြစ်ပါဘူး ။
အဲ့ဒါထက်စာရင် ကျွန်တော့်စိတ်ကူးတာက ဖိုရမ်သင်တန်းလို ပို့စ် ၁၀ ခုပြည့်မှ သူ့ဘာသာသူပေါ်လာအောင်ပဲ သတ်မှတ်တာက ပိုထိရောက်မလားမသိဘူး ။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ပဲနော် ... အက်ဒမင်မို့လို့ အတည်ပြုရမယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ။
အားလုံး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ့ ....အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော်အမြင်ကလည်း ၃ လကျော်လောက် inactive member (zero post) တွေကို ဖျက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညီလေးရာမည ပြောသလို ဖျက်ဖို့ရာအတွက် အခက်အခဲရှိတာရယ် ၊ ဒီအသင်းဝင်တွေကြောင့် ဖိုရမ်ဒေတာဘေ့စ်မှာ ပြသာနာသိပ်မရှိဘူး ဆိုတာရယ်ကြောင့် မဖျက်ဘဲ ထားလိုက်ကြရအောင်။
အသင်းဝင်တွေအတွက်တော့ အနည်းဆုံး ၅ ပိုစ့် ရှိမှ download links တွေ ပေါ်လာတာမျိုးလုပ်ထားလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ ၁၀ ပိုစ့်ဆိုရင်လည်း များသွားမလားလို့ပါ။ တကယ်လို့ အတည်ပြုပြီးသွားရင်တော့ စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာ ဒီအကြောင်းတွေ ထပ်ဖြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။
Zero Post Member တွေကိုဖျက်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Zero post member ထဲက Zero Thanks member ကို အဓိကထားဖျက်သင့် တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီ Forum ကို လာကြည့် လို့ အကျိုးရှိတယ် Download ချလို့ ရတယ်ဆိုရင် Post မတင်ရင် တောင် မှအနည်းဆုံး ကျေးဇူးလေးလောက်တော့ နှိပ်သွားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကျနော်ပြောလို့ သူငယ်ချင်း အင်ဂျင်နီယာ (၂) ယောက် ဒီကို လာကြည့် ပါတယ်။ တယောက်က Environmental PE နောက်တယောက် က Transportation PE ပါ။ ၂ ယောက်လုံးက ရန်ကုန်မှာ ၁၀ တန်းအောင်ပြီး US မှာ Civil နဲ့BS, MS ရခဲ့ တဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ ပြောတာကတော့သူတို့ ရဲ့Field တွေမှာ Post တင်ထားတာ သိပ်မတွေ့ တာရယ် မြန်မာလို မရိုက်တတ်တာရယ် (မြင်ရုံသာမြင် မကြင်နိုင်တဲ့ ဘ၀လို) ကြောင့် မလာဖြစ်တော့ ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို အကြောင်းများကြောင် member အရေအတွက်ဖေါင်းပွလာတာလည်း ဖြစ်နိင်ပါတယ်။
ပြောသလို Member များတာဟာ ကျွန်တော် တို့ဖိုရမ် ဒေတာဗေ့စ် ကို မထိခိုက်ဘူးဆိုရင် မဖျက်စေချင်ပါဘူး
ဘာလိုလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့တွေလည်း တစ်ခြား foreign ကဖိုရမ်တွေမှာmember ဝင်ထားတာရှိပါတယ်........
လိုအပ်လို့ရှိရင် လဲအဲဒီတွေကနေပဲပြေးပြေးယူနေရတုန်း ဝင်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကျတော့ကျွန်တော် တို့လဲ အဲဒီလောက်ထိ နားမလည်တာနဲ့ခုထိ0ပို့စ် ဖြစ်နေတယ် ........
ဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော် တို့ဖိုရမ် က လဲ မျှဝေပေးချင်တာ ပါ ဖိုရမ်ထဲမှာရှိတဲ့ အသိ ကိုအားလုံးကိုမျှဝေချင်ကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ
ကြိုက်တဲ့အချိန်လာ ...မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်က အားလုံး ကိုကြိုဆိုပါတယ် ဆိုတာမျိုး ကျွန်တော် တို့က ပြန်လိုချင်လို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဆီက ပေးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ..............
စေတနာဆိုတာတူသောအကျိုးပေးပါတယ်...........အခု ဇီးရိုးပို့စ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေထဲက ကော နောင်တစ်ချိန် ဖိုရမ် ကောင်းကျိုးကို မလုပ်ဆောင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး
သူတို့လဲလေ့တာနေတုန်း သူတို့နားမလည်တာတွေ ကျွန်တော် တို့ဖိုရမ် က သိ ပြီး တကယ်နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများဖြစ်သွားခဲ့ရင်......................
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက တော့ ဇီးရိုးမမ်ဘာတွေက ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ် ရဲ့ ဒေတာဗေ့စ် ကို မထိခိုက်ဘူးဆိုရင် မဖျက်စေချင်တာပါ.................
ကျွန်တော် ဒီဖိုရမ် က အကိုတွေထက်ငယ်ပါတယ်....အဲဒီအတွက် ကျွန်တော် ပြောတဲ့စကားတွေမှာ ရိုင်းပျ တာ မှားတာမျိုးရှိရင်ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်.......
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..inactive မဖြစ်တဲ့ zero ပို့စ်သမားတွေကိုထားထားတဲ့အတွက် ဖိုရမ်အနေနဲ့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတယ် ဆိုတာလဲ ဖိုရမ်ရဲ့ Data Base ကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပါပဲ..Newbie တွေထဲမှာ ကျွန်တော်ပြောသလို မမှတ်မိတော့လို့ အကောင့်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီး တစ်ခုကဘယ်ဟာမှန်းမသိတော့သလိုမျိုးတွေလဲရှိနေမှာပဲ..မဂျွန်မိုးအိမ်ပြောသလို ပြန်သုံးဖြစ်လို့ ကိုယ့်အကောင့်က သုံးမရတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာလဲ စဉ်းစားစရာပါ.အားလုံးဆွေးနွေးသွားတာကိုကြည့်လိုက်ရင် အကောင်းအဆိုးကတော့ ရောနေတာတွေ့ရမှာပါ.ဒါပေမယ့် ဖိုရမ်အတွက်အခက်အခဲမရှိရင်တော့ ဒီကိစ္စက ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး.ဒါပေမယ့် ပို့စ်ကန့်သတ်မယ့်ကိစ္စလေးကိုတော့ ကျွန်တော်နဲနဲအကြံပြုချင်လို့ပါ.ကျွန်တော်တုန်းကဆိုရင် မိတ်ဆက်ကဏ္ဍမှာ ပို့စ်တစ်ခုရေးရင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီလိုမိတ်ဆက်ရကောင်းမှန်းလဲမသိခဲ့ပါဘူး...ကျွန်တော်က စ၀င်ကတည်းက စသွားကတည်းက ကွန်ပျူတာအကြောင်းတွေပဲသွားဖတ်ဖြစ်တယ်..အဲဒီမှာ ကျွန်တော်သိထားတာလေးတွေ စဆွေးနွေးဖြစ်သွားတာပါ..ကျွန်တော့်ပို့စ်တွေက ကွန်ပျူတာအပိုင်းကနေစဆွေးနွေးဖြစ်သွားတာပါ..နဲနဲပိုသံယောဇဉ်ဖြစ်လာတော့မှ မေဂျာပိုင်းတွေ လုပ်ငန်းပိုင်းကဟာတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တာပါ.နောက်မှ နေရာစုံလျှောက်သွားပြီး ရှာပြီးတင်တတ်လာတာပါ.ပြီးတော့ ကျွန်တော့စိတ်ထင်ပေါ့နော်..ကျွန်တော်ပို့စ်စတင်တုန်းက ပို့စ်တစ်ခုတင်ဖို့ကို အများကြီးတွေးခဲ့ရတာပါ(ကြောက်စိတ်နဲ့ပေါ့)..ကလေးကလားများဖြစ်နေမလား၊ သူများတင်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေမလား၊ မှားနေမလား၊ Question Shoot လာနိုင်တာတွေရော အစရှိတဲ့ လားပေါင်းများစွာနဲ့ပါ..ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုက ကိုယ့်မှာသာတာဝန်ရှိတာကိုး..အဲဒီတော့ ပို့စ်တင်ဖို့မရဲတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်..ဒါကတော့ နောက်တစ်ခုပါ.ကျွန်တော်တို့ MEF က သက်တမ်းသာငယ်သေးပေမယ့် လူကြီးတစ်ယောက်လိုမျိုးဖြစ်နေတာ သတိထားမိကြမှာပါ..လူကြီးဆန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့..ဆွေးနွေးချက်တွေ လုပ်ဆောင်မှုတွေက တည်ကြည်လေးနက်ပါတယ်..ကျွန်တော်လဲ ဒီပုံစံမျိုးလေးကို ကြိုက်ပါတယ်.ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီလိုပါ.တစ်ချို့ဖိုရမ်တွေမှာ တွေ့ဖူးမှာပါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စနှောက်တာတွေ၊ အပြန်အလှန် စကားပြောထားတဲ့ပို့စ်မျိုးတွေပါ..တစ်ခြားဖိုရမ်များကို စော်ကားခြင်းတော့ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ.စတိုင်မတူတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြခြင်းပါ..ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အဲဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်လေ့မရှိပါဘူး..ပညာရပ်ပိုင်းကိုသာ အဓိကထားပြီး အပိုတွေသိပ်မပြောကြပါဘူး..ကျွန်တော်လဲ ကြိုက်ပါတယ် ဒီစတိုင်ကိုပဲ..ဒီတော့ သူတို့ဆွေးနွေးလာတဲ့အထိပဲ စောင့်လိုက်ကြတာပေါ့ ညီအစ်ကိုတို့ရာ..ဒေါင်းလုပ်သမားတွေအတွက် ပို့စ်(၅)ခုလောက်မှာ ပေါ်လာတာကောင်းပါတယ်..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ ဆွေးနွေးဖို့မရဲတဲ့သူမျိုးအတွက်ကျတော့ ဒုက္ခဖြစ်နိုင်ပါတယ်..တစ်ချို့အတွက်ကြတော့ သူအရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ဟာလေး အရမ်းကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာလေးတစ်ခု ဒီမှာတွေ့နေရပြီး ဒေါင်းမရဘူးဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင် စိတ်မကောင်းစရာကြီးပါ..နောက်တစ်ခုက ပို့စ်(၅)ခုပြည့်မှဒေါင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဒီနေ့သူ ဒီဟာလေးကိုရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ပို့စ်(၅)ခုပြည့်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး လိုချင်တာတစ်ခုအတွက် ပေးဆပ်ခိုင်းတာမျိုးကိုတော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး.နောက်တစ်ခုက အမြန်တင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီပို့စ်တွေအားလုံးကရော အကျိုးပြုပို့စ်တွေကြီးပဲ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာပါ.ဒီမှာဒေါင်းနေတဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ကယ်ကိုလိုအပ်လွန်းလို့ ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိုန်မှာပေါ့ MEF အနေနဲ့ ကန္တာရထဲက ရေသန့်ဗူးလေးဖြစ်လိုက်ရတာ ပိုပြီးမွန်မြတ်ပါတယ်ဗျာ..ဒါတွေက ကျွန်တော် နောက်မှသေချာစဉ်းစားမိလို့ အစ်ကိုတို့ကို ချပြကြည့်တာပါ..ကျွန်တော်တို့ ပီတိပဲ စားကြပါစို့လား..
အကြံလေးတစ်ခုတော့ ပေးချင်ပါတယ်..ကျွန်တော် တစ်ခြားဖိုရမ်မှာ ကြုံဖူးပါတယ်.ဒီမှာရောလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလား မသိဘူး..ဒေါင်းလုပ်ဆက်တိုက်လုပ်နေတာမျိုးကို ကန့်သတ်ထားတာမျိုးပါ..အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ အများကြီးဒေါင်းတာမျိုးပါ..ဒီမှာ လာဒေါင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲ တစ်ချိန်ထဲမှာတော့ သူလိုနေတာက သူဒေါင်းသမျှအကုန်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ..အဲဒီလိုလေး ကန့်သတ်လိုက်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့ပါ..ပြီးတော့ ဖိုးလပြည့်ကို ကျွန်တော်ကြည်နှုးစွာနဲ့ ကြွားဖူးတာတစ်ခုရှိပါတယ်.ကျွန်တော် ဒီထဲမှာ ဖုန်း ringtone တွေတင်ထားတာ အကြိမ်ပေါင်း ၂၅၀ လောက်ဒေါင်းသွားတာ ကျွန်တော်တစ်ကယ်ကြည်နူးနေတာပါ..အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ အနေနဲ့လဲ အဲဒီလိုစိတ်လေး ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..(အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့အနေနဲ့ ကိုယ်တင်တဲ့ပို့စ်တစ်ခုကို ကျေးဇူးတွေဝိုင်းပေးကြတာမျိုး၊ တင်လိုက်တဲ့ Upload တစ်ခုကို ၀ိုင်းပြီးဒေါင်းကြတာမျိုးအတွက် လူတိုင်းကြည်နှုးကြမှာပါ)..ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ MEF အနေနဲ့ ပီတိပဲစားကြပါစို့လား..ကန့်သတ်မယ်ဆိုလဲ တစ်ကယ်ကန့်သတ်သင့်တာက တစ်ချိန်ထဲမှာ အများကြီးဒေါင်းမယ့်လူမျိုးကိုပါပဲ..တစ်ကယ်အခက်အခဲဖြစ်ပြီး လာဒေါင်းတဲ့သူမျိုးကိုတော့ ပို့စ် ၅ ခုနဲ့မကန့်သတ်စေချင်ပါဘူး..
ကျွန်တော့်စိတ် ကျွန်တော့်အတွေးလေးနဲ့ အကြံပြုထားတာဖြစ်လို့ မှားယွင်းနေရင်တော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ..
နေညို့ အမြင်တော့ website ကို ဘာမှ ပြသာနာမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုရင် လုံးဝ မဖျက်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
ကိုရာမညဖိုးလပြည့်ပြောသွားသလို ဖိုရမ်အတွက် အခက်အခဲကြီးကြီးမားမား တစ်စုံတစ်ရာမရှိရင်တော့ member တွေကို မဖျက်ပစ်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာ .............. ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဖိုရမ်အတွက်ကိုပဲ အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ် ............. သိပ်ပြီးအခက်အခဲမရှိရင်တော့ မဖျက်ပစ်တာပိုကောင်းပါတယ် ............... ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးလေးတွေတော့ ပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ...........
နောက်တစ်ခုက ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဆွေးနွေးပေးသွားသလို မမ်ဘာဝင်တွေဆီကို news တွေပို့ပေးနိုင်ရင် မမ်ဘာဝင်တွေပိုပြီး စိတ်ပါဝင်စားလာကြမယ်ထင်တယ်............. တစ်လတစ်ခါဖြစ်ဖြစ်၊ အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေးတွေရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ .............
ဒီနေ့ ဖို၇မ်မှာ ကျမ ထူးထူးခြားခြားတွေ့လိုက်တဲ့ အ၇ာတစ်ခုက ZERO POST MEMBER ကိစ္စပါ။
ကျမ အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ၀င်မပြောဖူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့်လည်း ဖို၇မ် အကျိုး မျှော်ကိုးလို့ ၀င်ပြောပါ၇စေနော်
ကျမတို့ ဖို၇မ်ဟာ အဖွဲ့ဝင် မန်ဘာ မဟုတ်၇င် ဖတ်လို့ မရတဲ့ ဖို၇မ်ပါ
ဒီတော့ စာဖတ်ချင်တဲ့ သူဟာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်၇ပါတယ်
သူဟာ စာသာဖတ်တတ်ပီး မေ၇းတတ်တဲ့ လူဆို၇င်ေ၇းဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ကျမတို့ကြောင့် လူတစ်ယောက် အကျိုး ၇ှိသွားတယ်လေ... ပီတိဖြစ်စ၇ာပါ
ကျမတို့နောက်တစ်ခု သတိပြုသင့်တာက လူတိုင်း စာမေ၇းတတ်ပါဘူး
ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း စာေ၇းခါစမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိလည်း စာတစ်ပုဒ် စာတစ်ကြောင်းေ၇းခါနီးတိုင်းေ၇းသင့် မေ၇းသင့် စဉ်းစားနေ၇တုန်းပါပဲ
သူများတွေေ၇းတာကို အားကျစိတ်နဲ့ စမ်းတစ်ဝါးဝါး စေ၇းခဲ့တာပါ။
ဖို၇မ်၇ဲ့ ဒေတာဗေ့ကို ထိခိုက်မယ်လို့လဲ ကျမ မထင်ပါဘူး
ဖို၇မ်လေးလာပီဆို၇င် ဖို၇မ်၇ဲ့ ဆာဗာကို မန်မိုရီ ထပ်တိုးနိုင်အောင် ကျမတို့ စဉ်းစားကြတာပေါ့။
ကျေးဇူးခလုတ်လေးကိုတောင် မနှိပ်ဘူးလို့ အပစ်မတင်စေချင်ပါဘူး၇ှင်
၇န်ကုန်က ယူဇာတွေ ကျေးဇူးခလုတ်တစ်ခါနှိပ်ပီး ၁၀ မိနစ်လောက် စောင့်နေ၇တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုလေးတွေကို ကျမတို့က နားလည်ပေးဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့ လူတိုင်းလည်း ဒီဟာတွေနဲ့ ၇င်းနှီးမယ် မထင်ပါနဲ့
ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖို၇မ်ဆိုတာ ဘာကြီးလဲဆိုတဲ့ လူတွေ ၇ှိနေပါသေးတယ်။
ကျေးဇူးဆိုတာ နှိပ်၇ကောင်းမှန်းမသိတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေကိုလည်း သဘောထားကြီးစွာ လျစ်လျူ၇ှုပေးစေလိုပါတယ်။
ဖိုရမ်ကို ဘာမှ မလုပ်ပေးတဲ့ လူတွေကို ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုတာကို ကျမ လုံးဝ လက်သင့် မခံ ချင်ပါဘူး။
လောကကြီးမှာ လူတိုင်းသာ ဥယျဉ်မှုးဆို၇င် တစ်ကမ္ဘလုံး ဥယျာဉ်တွေ ဖြစ်နေမှာလေ
သစ်တစ်ပင်ကောင်းကို ငှက် တစ်သောင်းနားနိုင်အောင် ကျမတို့တတ်နိုင် လုပ်နိုင် အခွင့်အေ၇း ၇ှိသမျှ လုပ်ပေးကြ၇အောင်နော်
ဒီသစ်ပင်အောင်မှာ နားချင်တဲ့သူနားနိုင်အောင် အ၇ိပ်ခိုချင်တဲ့သူ ခိုနိုင်အောင် တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးချင်ပါတယ်
အ၇ိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး သမားဆို၇င်တော့ မောင်းထုတ်ပစ်၇မှာပေါ့လေ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အမKPZ ပြောသလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာတွေကမ္ဘာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေ ခုဆိုမြန်မာတွေနည်းပညာအရနောက်ကျနေတာ မနည်းမှီအောင်လိုက်နေရတာလေ ဒါကိုမသိရကောင်းလားဆိုပြီအပြစ်တင်မလို့လားဗျာ ကျွန်တော်တောင်မှပြောပြထားပါတယ်လေ ဒီဖိုရမ်ဝင်ဖို့3ရက်အချိန်ပေးရတယ်လို့ပြောဖူးပါတယ် ကျွန်တော့်လိုလုမျုိးတွေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူး ဖိုရမ်ကိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်မယ့်သူမဟုတ်သရွေ့ပေါ့ မဖျက်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဖျက်ပစ်မယ်လို့စဉ်းစားမယ့်အစား အမြင်တစ်မျိုးပြောင်းပြီး ဒီလိုလူတွေကို ဖိုရမ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားကြရအောင်လားဗျာ ကျွန်တေ်ာတို့ဖိုရမ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ ဘယ်လိုလုပ်ရင်အသင်းဝင်တွေအနေနဲ့ ပိုအကျိုးများမလဲ သူတို့လေးတွေ ဖိုရမ်နဲ့အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်အောင် ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာမျုိးစဉ်းစားကြရအောင်လားဗျာ ကျွန်တော်ကဖိုရမ်မှာ ပမွားပါခင်ဗျာ ဒါပေမယ့် ဖိုရမ်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်ကိစ္စဆိုရင်တော့ ကျွှန်တော်ပြောရပါလိမ့်မယ့်ခင်ဗျာ အားလုံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျနော်ပြောလို့ သူငယ်ချင်း အင်ဂျင်နီယာ (၂) ယောက် ဒီကို လာကြည့် ပါတယ်။ တယောက်က Environmental PE နောက်တယောက် က Transportation PE ပါ။ ၂ ယောက်လုံးက ရန်ကုန်မှာ ၁၀ တန်းအောင်ပြီး US မှာ Civil နဲ့BS, MS ရခဲ့ တဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ ပြောတာကတော့သူတို့ ရဲ့Field တွေမှာ Post တင်ထားတာ သိပ်မတွေ့ တာရယ် မြန်မာလို မရိုက်တတ်တာရယ် (မြင်ရုံသာမြင် မကြင်နိုင်တဲ့ ဘ၀လို) ကြောင့် မလာဖြစ်တော့ ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာလို ဆွေးနွေးမှ၊ ရေးမှ ပိုဖတ်ဖြစ်တာကြောင့် ခေါင်းစဉ်တော်တော်များများ၊ ဆွေးနွေးချက်တော်တော်များများက မြန်မာလို ဖြစ်နေတာထင်ပါတယ်။ MEF မှာ များများစားစား ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ မန်ဘာတချို့က အလယ်အလတ် အဆင့် Technical Writing လောက်ကို ရကြပါတယ်။ တချို့ဆို First Class ဆိုလောက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာလို ရေးဖို့ မလွယ်ရင် အင်္ဂလိပ်လို ရေးလို့ ရပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။ အဆင်ပြေတဲ့ မန်ဘာတွေက အင်္ဂလိပ်လို တတ်နိုင်သမျှ ပြန်ဆွေးနွေးပေးမှာပါ။ တခုတော့ ရှိတယ် အကိုရယ်၊ ဒီမှာက အတွေ့အကြုံဗဟုသုတများတဲ့ နောင်တော်၊ အစ်မတော် အင်ဂျင်နီယာတွေက မျိုးဆက်သစ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ပေးနေရတာများပါတယ်။ တချို့ PE တွေအတွက် အပေး ၈၀% မှ၊ အယူ ၂၀ % တောင် အနိုင်နိုင်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စေတနာရှေ့ထားပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက် ပို့စ်တွေမများသေးလည်း ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ အကို့ သူငယ်ချင်းများကို တိုက်တွန်းပေးပါဦး ခင်ဗျာ။
MEF အုပ်ချုပ်သူများနဲ့ စီနီယာ မင်ဘာများကိုလည်း Technical Writing &amp; Discussion Campaign စကြဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးကျင့်ရှိမှ ဆွေးနွေးကျင့်ရှိမှ၊ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာတွေ တန်းဝင်မှာပါ၊ အနည်းဆုံးတော့ အာဆီယံအင်ဂျင်နီယာ အဆင့်ပေါ့။ အကိုလည်း ကူညီပါဦး။
နွေ ဦး ကို
ဟုတ်ပါတယ် မန်ဘာတွေကို ဖျက်မပစ်သင့်ပါဘူး။
ရေးရေး မရေးရေးပါ။ သူအကောင့်လေး ရှိနေသေးတော့ သူသတိရလာတဲ့အခါ ဝင်ပါစေ။ ဇရပ်တစ်ခုလိုပေ့ါ ဝင်ပါ ထွက်သွားပါ.ရေသောက်သွားပါ.
သူတို့ လမ်းကြုံမှ ဝင်ပါ။ လမ်းမကြုံရင် ဆက်သွားပါစေ... သတိတရရှိလာလို့ ဝင်မယ်လို့ စိတ်ရှိလာတဲ့အခါ သူ့အကောင့်လေး မရှိတော့ရင်
လူဆိုတာ စိတ်ကွက်သွားတတ်ပါတယ်။ကျနော်လည်း တခြားဖိုရမ်မှာ ဝင်ထားတယ်.. တစ်ခါတစ်လေ မသွားဖြစ်ဘူး။ အကြောင်းပေါ်လာလို့ သွားတဲံ့အခါ ကျနော့် အကောင့်လေး မပျက်မစီးရှိနေသေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်.. မန်ဘာတွေရဲ့ list ကို မှတ်ထားတဲ့ ဒေတာဘေ့စ်က အဲလောက်မများပါဘူး Topic တစ်ခုဟာ 11 kb ရှိရင် မန်ဘာတွေအတွက် မှတ်ထားရတဲ့ ဇယားလေးဟာ 10 kb လောက်ပဲရှိပါတယ်. ဒါတောာင် ယူနီကုတ်မို့လို့ပါ။ အဲဒီအတွက်စိတ်ရှုပ်မခံကြပါနဲ့ ။ မန်ဘာတွေ ထောင်ဂဏန်းပြနေပေမယ့် ကျနော်တော့ အက်ဒမင်ဘက်ကကြည့်ရင် အဲဒီထောင်ဂဏန်းမှာ တစ်ကယ်တော့ အက်ခတီဗိတ်မလုပ်ရးတာ အများကြီးရှိပါသေးတယ်.သူတို့ မလုပ်တတ်တာပါမယ်. တစ်ချို့က မလုပ်ချင်တာပါမယ်။ မေးလ်မရှိလို့ မလုပ်ရတာလည်းပါမယ်.. ကျနော်ကတော့ အခြေအနေကြည့်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာများပါတယ်။။ ကျနော်ဒီပုိ့စကိုတင်ချင်နေတာ ကြာပြီ။ ဒီတော့ပစ်ရေးထားတဲ့ ဘုတ်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့လို့။ ဒီတော့ကာဗျာ.. ပညာဒါနမှာ မလိုအပ်ပဲ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းလိုမျိုးလေးတွေ ကျနော်တို့ အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်သင့်တယ်လို့ ကျနော် ဒီနေရာကနေ အားလုံးကို အကြံပေးတင်ပြချင်ပါတယ်။ အကြံပေးချက်များအားလုံးကိုလည်း လေးလေးစားစား ဖတ်ရှုလျက်ပါ။ ကြိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။။ အကြံပေးပြီဆိုကတည်းက ဒီဖိုရမ်အပေါါ်စေတနာကောင်းထားရှိတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်လို့ ကျေးဇူးအထူးတင်နေမှာပါ။ နောက်များမှာလဲ အကြံကောင်းလေးတွေ ပေးနိုင်ကြပါစေလို့
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှာ နေ့စဉ် မြန်မာအလင်း ကြေးမုံ သတင်းစာ ကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစေချင်ပါတယ် ..
ဖိုရမ်က ညီအကိုမောင်နှမ များအနေဖြင့် မြန်မာအလင်း ကြေးမုံ (http://www.myanmar.com/newspaper/myanmarahlin/index.html) ၀က်ဆိုဒ်သို့သွားစရာ မလိုပဲ ...နေ့စဉ်ဖိုရမ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ် ....
လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်အထွေထွေ သတင်းများ ကဏ္ဍအောက်မှာ တော့ပစ် အသစ်ဖွင့်ပြီး တက်နိုင်သလောက် Upload တင်ပေးသွားမယ် ...
Phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဏ္ဍ လေးထည့်ပေးစေခြင်းပါတယ်
ရလားမသိဘူး :? :? :? :? :?
Phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဏ္ဍ လေးထည့်ပေးရင် Phone knowledge ပါရတာပေါ့နော် :4: :4: :4: :4:
Phone နဲ့ ပက်သက်ပြီး အောက်ကလင့်မှာ ဖွင့်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။
MEF မင်ဘာများအားလုံးသို့တစ်ခုလောက် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ်မှာ ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။ ခုချိန်ခါမှာ လူတိုင်း နီးပါး ဓါတ်ပုံနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အနည်း နဲ့ အများ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာကအစ ကင်မရာလေးတွေပါတာမို့အလွယ်တကူလည်း ရိုက်ကူးလို့ ရနေပါပြီ။ ကိုယ်ရိုက်ကူးမိတဲ့ နှစ်သက်ရာရာ ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း ကိုယ်သံယောဇဉ်ဖြစ်မိတဲ့ ဖိုရမ်ညီအစ်ကို မောင်နှမများကလည်း မျှဝေခံစား ပေးလိုကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ မလွဲပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေထဲက မျှဝေခံစား လိုတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးများကို ဖိုရမ်မှာတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ရိုက်ကူးရာမှာ ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် ရိုက်ကူးလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိရင်လည်း ကျွန်တော်အပါအ၀င် အခြားသော အတွေ့ အကြုံရှိသူများက ကိုယ်သိထားတာလေးတွေကို ပြောပြဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပညာတိုးတက် လာဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့အများလည်းစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ နယ်ပယ်ဖြစ်တာတစ် ကြောင်း ဖိုရမ် စည်ကားတိုးတက်ရာ ဖြစ်မှာလည်းတစ်ကြောင်း ကိုယ့် ခံစားမှုလေးတွေကို မျှဝေခံစား လို့ ရတဲ့ မိသားစုတွင်း နွေးထွေးရင်းနှီးစေမှာဖြစ်တာလည်း တစ်ကြောင်း စသည်စသည်အကြောင်းတွေ ရှိလာနိုင်တာမို့ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကို မျှဝေခံစားကြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဒီနေ့ တော်တော်အားတယ်လေ :)
ဒီတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဟိုလည် ဒီလည်နဲ့
နေ့တိုင်းဝင်တဲ့ဖိုရမ်တောင် နေရာအနှံ့ မသွားနိုင်ဖူး M;
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုယ့်နာမည်အောက် ကိုယ်သွားမှာ &quot;စိတ်ဝင်မှုများ&quot; ကြီး သွားတွေ့တယ် :? :2: :2:
Exchange Rate Update ခေါင်းစဉ် မှာပို့ တွေအရမ်းများလာလို့ခေါင်းစဉ် အသစ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်တာတွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီအသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်မှာ Version2ဆိုပြီးထည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ Version 1 ရှိသေးတာကို သိကြမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်သူများက ပြန်လည်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
$ exchange rate Update (2) ဆိုပြီး ကျွန်တော် ပြင်ထားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Programming ဆိုတဲ့ ဖိုရမ်ခွဲအောက်က PLC/PIC ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ပိုစ့်တွေကို သင့်တော်ရာ အင်ဂျင်နီယာ သရက်ဒ်တွေ အောက်မှာ စုပေးစေချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Control Engineering အောက်ပေါ့။ ဖိုရမ်မှာ Control Engineering မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Electrical Power Engineering (or) Electronic Engineering အောက်ကို ရွှေ့ပေးလို့ ရမလားခင်ဗျာ။
ပြီးတော့ PLC အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ၊ လေ့လာချင်တဲ့သူတွေ စုပြီး PLC program လေးတွေး ရေးကြည့်၊ Simulation လုပ်ကြည့်မလားလို့။
အကြံပြုကြည့်တာပါ ခင်ဗျာ။ သင့်တော်သလို ဆောင်ရွက်တာကတော့ မောဒ့်တွေက ပိုပြီး သိမှာပါ။
ထွေရာလေးပါးမှာ ပိုစ့်တွေက forward mail က ရတာလေးတွေ တင်ထားတာ အတွေ့များနေတယ်
အဲ့ဒါလေးကို နာမည်တစ်ခုနဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုထဲ စုပေါင်းလိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ပါ
ပိုစ့်အသစ်တွေ အများကြီးဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီပိုစ်တွေကလဲ လူတိုင်းလိုလိုရဲ့ မေးလ်ထဲမှာ တွေ့နေရတဲ့ စာတွေပဲ ဖြစ်နေတော့ ...
တင်ပေးတဲ့သူရဲ့ စေတနာကိုတော့ နားလည်ပါတယ်
( တာတာ့ စိတ်ကူးသာ ဖြစ်ပါကြောင်း :) )
အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါ အမရေ ..
ကိုယ်တော့မပိုင်ဘူး မေးလ်ကရတဲ့ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေပါ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,7192.0.html) ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်က အရင်ကတည်းက ရှိပါတယ်။
နောက်ပိုင်းများလာတာနဲ့ မပေါင်းနိုင်တော့လို့ ထားလိုက်ရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်သလောက် ပေါင်းသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ ။
အသင်းဝင်များလဲ မေလ်းမှရတာကို အခုခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ စုထားစေချင်ပါတယ် ။ ကူညီပေးကြပါဦးနော် ။
MEF Digest ဆိုပြီး ထုတ်ကြအုံးမလားဗျ... (ဟီဟိ ... ဆဲတော့မှာပဲ) :7:
လစဉ်ပုံမှန်ထုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုကြားကြိုကြားလေးပေါ့။
အရင် MEF ဂျာနယ် အတွက် အိပ်ရေးပျက်ထားတာ ပြန်အိပ်လို့တောင် အိပ်ရေးမ၀သေးဘူး။ :4: :4: :4:
ဒီတစ်ခါ MEF Digest ဆိုရင်တော့ သေပြီဆရာပဲ :haha: :haha: :haha:
ကျနော်ကတော့ အရှိန်ရနေတယ်ဗျ... ဟဲဟဲ .... :4:
အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ တွေ Active ဖြစ်နေအောင်ပါ...။ (ပိုက်ပိုက်ရတဲ့ အလုပ်တော့လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ) :e
စာမျက်နှာ သိပ်အများကြီးလဲဘယ်ဟုတ်မလဲ ... ပေါ့ပေါ့ပါးပါးး ပေါ့....။ ;)
ပို့တိုလေးတွေလဲရှိဆိုရင်တော့..ရေးသူလဲအားရှိ...ဖတ်သူလဲ..အကျိုးပွားမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ. ဒီမှာပါဗျ ဘယ်လိုများလုပ်သင့်ပါသလဲ..